Online Burma Library > Reading Room > News - Daily newspapers produced by the Government of Burma/Myanmar (archive from June 2003) > "The [Global] New Light of Myanmar", "Kyemon" and "Myanmar Alin" > "The Mirror" ("Kyemon") archive > "The Mirror" ("Kyemon") 2010
Home > Reading Room > News - Daily newspapers produced by the Government of Burma/Myanmar (archive from June 2003) > "The [Global] New Light of Myanmar", "Kyemon" and "Myanmar Alin" > "The Mirror" ("Kyemon") archive > "The Mirror" ("Kyemon") 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 31 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (0.99 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊၂၀၁၀
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (975 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (944 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.12 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (997 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.41 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.07 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (922 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (966 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.17 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.44 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊၂၀၁၀
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.34 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.19 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.64 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (4.60 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (5.46 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.23 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (5.11 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (op-1.03 MB), (original- 5.91 MB)
Alternate URLs: http://www.burmalibrary.org/DocsMirror/Mirror2010-12-11.pdf (Original file)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊၂၀၁၀
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၉၊၂၀၁၀
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၈၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.32 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၇၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (929 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၆၊၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.02 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၀
Format/size: pdf (1.10 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၀
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖလား တပ်မတော် ( ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ရပခဇုန် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆန်းဦး တက်ရောက်... မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဂန့်ဂေါမြို့ ၌ (၉ဝ)ပြည်နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ ... အရိုးရောဂါကုဆရာဝန်များ တတိယအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံ ကျင်းပမည်... ထူးချွန်ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုပွဲ ကျင်းပ... ကျေးရွာ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးစာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံသစ်ဖွင့်... မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ စာရင်းကိုင် အလုပ်သင်နှင့် သင်တန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း)သင်တန်း စာမေးပွဲကျင်းပမည်... စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး သာကြီးတောင် ရေနံမြေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး...ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန် )သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည်... ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာမိသားစု အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အလက(၁) တာမွေ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲအောင် အာယုသုခအထူးကုဆေးခန်း ဖွင့်ပွဲတက်ရောက် ... TV Guide ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ ... ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်မြင့် မသန်စွမ်းသူများ စွမ်းရည်ပြပွဲ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်... တောင်ငူမြို့ အထက(၆) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... Home Decoration & Furniture Electronic 2010 ပြပွဲ၌ Acer ရွေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီလီမိတက် ပါဝင်ပြသ ...ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ အိမ်တွင်းအလှဆင်နှင့် အီလက်ထရောနစ် အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်ဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်ချီးမြှင့်... မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အားပေးထောက်ခံမှု၊3Diseases Fund စသည့် ရန်ပုံငွေ ကူညီပံ့ပိုးမှုများအပြင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှာ Global Fund Round-9 မှ ရန်ပုံငွေကူညီ ပံ့ပိုးမှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် လာမည့်နှစ်တွေအတွက် ရောဂါကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေး၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်... ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေးအသွင်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် သုည ဒသမ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် သုည ဒသမ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် သုည ဒသမ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းသို့လျော့ကျ ရောဂါကာကွယ်ရေး ပညာပေးလုပ် ငန်းများကို ကုသရေးလုပ်ငန်းများနည်းတူ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ လူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု အထိမ်းအမှတ် ဓာတ်ပုံ၊ ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုတိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... အရည်အသွေး၊ အာနိသင်ပြည့်မီသော ဆေးဝါးများအကြောင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပ ... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်ဌေး မြို့နယ်ပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက် ... နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များအကြောင်း ဟောပြောမည်... ချောက် GTIပဉ္စမအကြိမ် မိတ်ဆုံစားပွဲ ကျင်းပမည် ... အထက(၁၄) (လဖုန်းအထိမ်းအမှတ်ကျောင်း)ကျောင်းသားများ (၁၃)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည် ... ကေတုမတီ(တောင်ငူ) မြို့တည်၊ နန်းတည် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင် ... အထက(၃)ဒဂုံ (ယခင်မြို့မ အမျိုးသမီးကျောင်း) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည် ... တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ ... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ မလိခမြစ်ကူး ကောင်းမှုလုံကြိုးတံတားသစ် ..... ဆောင်းပါး။ ။ မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ထားရှိသည့် အမြင်သစ်- ကြည်ထွန်း (လူမှုဝန်ထမ်း) ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါစို့- သတင်းဆောင်းပါး တင်ထွေး(သတင်းစဉ်)၊ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း-ကိုထွေး ...
Format/size: pdf (1.10 MB); Font: Myanmar3
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ (၉ဝ)ပြည့် နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားများ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားနှင့် လယ်ဝေးမြို န့ ယ်တို့၌ ကျင်းပ ... ပထမအကြိမ် နေပြည်တော်- မန္တလေး -နေပြည်တော် မိုင် ၃၉ဝခရီးရှည်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစက်ဘီး ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ ပွဲစဉ်နှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ... Golden Arrow Photo Studio & Video Service ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... မြိတ်မြို့ ဆေးရုံကြီး စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်မှု တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်ဌေးကြည့်ရှု့အားပေး ... တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြို င်ပွဲ ပထမအဆင်အုပ်စု ပတ်လည် ပြိုင်ပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပ... တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ... အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းဖွင်... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ဟောပြောပွဲ နေပြည်တော်ခရိုင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၌ ကျင်းပ... သာကေတ အထက(၂) မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပရေး ညှိနှိုင်းစည်းဝေးမည်... ဒို့ကျေးရွာဂျာနယ် အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၂၃) ထွက်ရှိ... ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (၁၆)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ပျူခေတ်လက်ရာ ဒင်္ဂါးပြားများနှင့် ကုန်းဘောင်ခေတ် လက်ရာ ကြေးထည်ပစ္စည်းများ အပ်နှံမှုအတွက် ဆုကြေးငွေနှင့် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ချီးမြှင့် ... မကျီးတန်း အမက အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အင်းစိန် အထက(၁) မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ... ယာဉ်မတော်တဆမှုပပျောက်ရေး ဝမ်းတွင်း၌ ဟောပြော ... (၂၆၃)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့် ... ရာဇာလင်းမိသားစု ဆေးတက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆု လတွေ့ စစ်ဆေးမည် ... Home Decoration & Furniture Electronic 2010 ပြပွဲ၌ ပါကေးအစားထိုးကြမ်းခင်းများ ပါဝင်ခင်းကျင်းပြသ ... ကရင်ပြည်နယ် ဒေသကောလိပ်နှင့် ဘားအံကောလိပ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်မည် ... (၉ဝ)ပြည့်နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အခြေခ ပညာကျောင်းများ၌ ကျင်းပ... အောက်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန် အနည်းငယ်ပိုနိုင်... ဆည်မြောင်းစီမံကိန်းများတွင် ရေအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပ ... ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်း ခေတ္တညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် စံပြစိုက်ပျိုးရေးအထူးဇုန်အတွင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ ... ဒီဇင်ဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းထွက်ပြီ ... ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ စတုတ္ဃအကြိမ် ပန်းချီပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည် ... ကျိုက္ခမီအသင်း(ရန်ကုန်) နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည် ... မော်တော်ဆိုင်ကယ် ရက်တိုယာဉ်မောင်းသင်တန်းဖွင့်... မင်းတုန်း မြို့နယ် ဆင်သေကျေးရွာ၌ မူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ... ဘီးလင်းမြို့ ကျွန်းတောလမ်း ကတ္တရာထပ်ပိုးလွာခင်း... ချစ်နိုင်( စိတ်ပညာ)၏ အချိန်ကိုအသုံးချနည်း စာအုပ်သစ်ထုတ်ဝေ ... မြို့သာယာလှပရေး ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ...ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ.. မှတ်သားဖွယ်ရာ မိုးရေချိန် ..... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး လာအိုနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတထံ သဝဏ်လွာပေးပို့ ... နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ လာအိုနိုင်ငံသမ္မတထံ သဝဏ်လွာ ပေးပို့ ... နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် လာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ထံ သဝဏ်လွာပေးပို့... ဝန်ကြီး ဦးဉ ဏ်ဝင်း ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွာပေးပို့..... အယ်ဒီတာ့ အာဘော်။ ။ နိုင်ငံတော်သစ် တွဲလက်ညီညီ ရှေ့သို့ချီ ..... ဆောင်းပါး ။ ။ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ သတိပြုရှောင်ကြဉ်ပါ (ဒေါက်တာသိင်္ဂီအောင်)
Format/size: pdf (1.14 MB); Font: Myanmar3
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 December 2010/ "ကြေးမုံ" ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးတာဝန်ကြီးကို အစိုးရ၊ ပြည်သူနှင့် တပ်မတော် လက်တွဲ၍ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့ ဂုဏ်ယူထိုက်သော သမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးဖြစ် နိုင်ငံတော်အာဏာကို ပြည်သူ့ထံသို့ ပြန်လည် အပ်နှင်းရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိ... နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့့်် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ တပ်မတော်ကာယွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံမှ ပေးပို့သော(၉ဝ)ပြည့်နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ သဝဏ်လွှာ... ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန တပ်တောင် ရေလမ်းကြောင်းနှင့် အမ်းလေဆိပ်လုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း နှင့် ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဆာဖာရီဥယျာဉ်(နေပြည်တော်)၌ ထားရှိပြသမည့် ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များ ပြည်ပမှ ရောက်ရှိ ... MFF PEP WOMEN CUP 2010 ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ ... စီးပွားရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ ( ၄/၂ဝ၁ဝ) ကျင်းပ... တူဒေးစာအုပ်တိုက်ထုတ် Myanmar Series စာအုပ်များ စျေးနှုန်းလျော့ ...ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ် ထွက်ရှိ... ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်... နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ သင်ကြားပေးလျက်ရှိ... နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်ပွဲရ မြန်မာအား ကစားအသင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိ ... တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသများ နေရာကွက်ကျားမိုးရွာနိုင် ... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ ... အောင်ပွဲရ တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနှင့် ဝူရှူးအသင်းတို့အား ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲအောင် တက်ရောက်... ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းဖွင့်မည်... ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် ဖြန့်ချီ ... မြောက်ဥက္က လာပအထက(၄)စံပြအာစရိယပူဇော်မည်... ဘဏ်များကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ (၁၂၃)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပ ... အိုလံပစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌဖလား လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ပွဲစဉ်အားလုံး ကို ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင် ... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ် လှမင်း ရေနံ့သာ-ဂွလမ်း ကြံ့ ခိုင်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပုသိမ်-မုံရွာလမ်း တိုးတက်ပြုပြင် ခြင်းလုပ်ငန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... ညောင်တုန်းမြို့ နယ်၌ တောင်သူများအား ပံ့ပိုးငွေ ပေးအပ်ပွဲတက်ရောက် ... (၁၁)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များ ညီလာခံ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅၊ ၆)ရက် နေပြည်တော် သက်ကြီးစာပေပညာရှင်များ ကန်တော့ပွဲ အလှူငွေနှင့် ကန်တော့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းကြရန် နှိုးဆော်... ပါတီစုံဒီမို ကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြသော အနုပညာရှင်များအား ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပ ... အမျိုးသမီးဝတ်စုံ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်မည် ... News Watch(စောင့်ကြည့်) သတင်းဂျာနယ်ထွက်ရှိ ... မြန်မာအိုးပင်း စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည် ... ဘားအံမြို့နယ်၌ ဟိုင်းလတ်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက် ..... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦး တရုတ်ဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ်ဥက္ကဌအား လက်ခံတွေ့ဆုံ ချေးငွေထုတ်ချေးရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ တက်ရောက်... ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပိုင်စိုး တရုတ်တိုင်းရင်း ဆေးပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နိုင်ငံ တကာညီလာခံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ ... ဝန်ကြီး ဦးသိန်းအောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျားမျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး ထိပ်သီးညီလာခံသို့ တက်ရောက် ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ အမျိုးသားရေး၏ မီးရှူးတန်ဆောင် ..... ဆောင်းပါး။ ။ အမျိုးသားရေးအားမာန် အမျိုးသားနေ့အဓိဌာန် (ကြည်ဝင်းညွန့်)... အေးချမ်းသာယာမှု၏ ငွေလမင်း(သို့ ) ရွေကျင်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း -သတင်း ဆောင်းပါး-ဇော်မိုးသောက်၊ ဓာတ်ပုံ- ရွေကျင်(ရေအား)..... ကဗျာ။ ။ အမျိုးသားရေး နိုးကြားသံ -နှင်းမောင်(ဇီးကုန်း)... အမျိုးသားနေ့ သန္နိဌာန်(ရာဇာညွန့်)
Format/size: pdf (1.28 MB); Font: Myanmar3
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ရွေးကောက်ပွဲသတင်း။ ။ လွှတ်တော်များဖွဲ့စည်းရေးအတွက် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများကို နိုဝင်ဘာ(၇)ရက်တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း အောင်မြင်အောင် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်..... ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ ပူတာအိုမြို့ နယ်တွင် မလိခမြစ်ကူး ကောင်းမှုလုံကြိုး တံတား ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် အစင်း ၂ဝ မြောက် နိုင်ငံတော်က တည်ဆောက်ပေးသည့် ပေ ၁ ဝ အထက် တံတားကြီးဖြစ်... ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဘက်ပေါင်းစုံမှ တိုးတက်လာမည်... ကမ္ဘာ့ဆီးချိုသွေးချို ကာ ကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တက်ရောက်... ဧရာဝတီ မြစ်ကူး အနော်ရထာတံတား(ချောက်)ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်... အထက အင်းတ ကော် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အထက(၁) လသာ ကျောင်းသားဟောင်းများ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ပူတာအိုမြို့နယ်နှင့် မချမ်းဘောမြို့နယ် ဒေသဖွံ့ ဖြိုးမှုအခြေအနေများ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး ထောက်ရှာပင် ကမ်းနီရေနံမြေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... (၆၃) ကြိမ်မြောက် တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ စာမေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပမည်... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် ချီဖွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံ ခရစ်ကက်ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လု ပွဲများနှင့် ဆုချီးမြှင့် ပွဲ ကျင်းပ... အထက(၁) လမ်းမတော်( စိန်ဂျွန်း) မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပ မည်... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြပွဲကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ သုံးသပ် အစည်းအဝေးကျင်းပ... နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ကျင်းပပြီးစီး ပြပွဲကာလအတွင်း တင်ဒါစနစ်၊ စျေးပြိုင်စနစ်တို့ဖြင့် ကျောက်စိမ်းအတွဲပေါင်း စုစုပေါင်း ၇၇ ၄ တွဲ ရောင်းချရ... တူဒေးစာအုပ်တိုက်နှင့် ပြည့်စုံစာအုပ်တိုက် စာအုပ်အရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည်... ဒလမြို့ အထက (၁)အာစရိယပူဇော်မည်... ဝန်ကြီး ဦးလွန်းသီ ညောင်တုန်းရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေ ကြည့်ရှုစစ် ဆေး... မြောက်ပိုင်းဒေသများ ကွက်ကျားမိုးရွာနိုင်... အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် ( ၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်Seminar ကျင်းပ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၏ စာရေးသားနည်းစာအုပ် ထွက်ရှိ... (၄၉)ကြိမ်မြောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖလား တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... မသန်စွမ်းသူများ လေ့လာရေးခရီးထွက်မည်... ပေါင်းတည်၌ မိုးစပါး စံကွက်ရိတ်သိမ်း... အထက ညောင်ကျိုး အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြောက်ဥက္ကလာပ အထက(၄)စံပြ အာစရိယပူဇော်မည်... ရန်ကုန်မြို့ကို ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြင့် အလှဆင်မည်... ဆူဇူကီးဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့စတင်မည် မြန်မာအသင်း အောင်ပွဲရ၍ မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်... လှော်ကားဥယျာဉ် အမျိုးသားနေ့ဖွင့်မည်... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ ရထားလမ်းသစ်ကွန်ရက်များ တိုးချဲ့ပေါ်ထွက် အထောက်အကူပြုစက်ရုံများ ဖွင့်လှစ် ..... ဆောင်းပါး။ ။ အမျိုးသားနေ့နှင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများ- မြင့်မောင် ((PhilQ)..... ကဗျာ။ ။ အမျိုးသားနေ့ ဘယ်မမေ့နိုင် ဦးအောင်မွန်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
Format/size: pdf (1.31 MB); Font: Myanmar3
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၀
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ ဆဌအကြိမ် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့(၄၇)ပါးစုံညီ ဒွါဒသမအစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပ... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တိုင်းကိုယ်စားပြု အားကစားအသင်းများ တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်... ဘုရင့်နောင်စျေးမိသားစု ပညာရည်ချွန်ဆုချီးမြှင့်... R.I.T/Y.I.T /Y.T.U (EP/EC)(၁၉၉၅ မှ ၂ဝဝ၃)ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်မည်... မိုးစပါး အထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေး မြောင်မြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်များနှင့် ဘာသာရပ်များ ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းကောင်းများ စုစည်းရှင်းလင်းမည်... ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်သံ ဃနာယကများက ပိတ်ပင်ထား သည့်ကိစ္စများကို အလွယ်တကူ ခွင့်ပြုတော်မမူကြဘဲ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်သံဃ နာယကအဖွဲ့များ၊ သာသနာရေးမှူးများထံ သေချာစွာစုံစမ်းပြီးမှသာ ခွင့်ပြုသင့်... ကတ္တရာထပ်ပိုလွှာခင်းခြင်းဆောင်ရွက်... မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၄)ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ဝန်ကြီး ဦးလွန်းသီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာ ဗီဂျေ နမ်ဘီးယားနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိ... ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ် အတွဲ( ၆) အမှတ် (၄၆) ထွက်ရှိ... ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်မည့် ဘက်စုံရေသယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကို ဦးတည်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ မည်... တစ်ပြည်လုံးတွင် အများအားဖြင့် သာယာမည်... ဝတီးမြို့ဟောင်း တတိယအကြိမ် တူးဖော်ရာမှ ပျူခေတ်အစောပိုင်းယဉ်ကျေးမှုများ တူးဖော်တွေ့ရှိ... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်အေးနှင့် ဝန်ကြီး သူရဦးအေးမြင့် နေပြည်တော်-မန္တလေး- နေပြည်တော် ခရီးရှည်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက် ... ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီမြို့ ဝိဝေကာရုံကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယကဆရာတော် ဒေါက်တာ ဒ္ဒန္တအာသဘ ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူ...၂ဝ၁ဝခုနှစ် အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံ လူသစ်တန်းခရစ်ကက်ပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် ကြည့်ရှုအားပေး ... အာဆီယံ-တရုတ် လူငယ်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကြည့်ရှု လေ့လာ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဆဌမအကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့် ပွဲကျင်းပ...ရန်ကုန်-မန္တလေးစျေးသင်္ဘော ဒီဇင်ဘာလတွင် ထွက်မည်... အချစ်လား လာထား ဇာတ်ကား ဆက်လက်ပြသ... MFF PEP WOMEN CUP 2010 အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပွဲကြိုစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ...Logistics Management for Myanmar သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်... ဖျာပုံမြို့ အမှတ်(၁ဝ) မြို့မ အမက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... မြန်မာ့ပိုက်ကျော်ခြင်း အားကစားအသင်း ရွေတံဆိပ်နှစ်ခု ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ မြို့ရွာရပ်ကျေး မီးဘေးအန္တရာယ် သတိပြုကာကွယ်..... ဆောင်းပါး။ ။ ကွတ်ခိုင်-တာမိုးညဲ-တာပါး ၁ မိုင်လမ်းဆုံ(တာရွေထန်) မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဖျား တောင်ပေါ်လမ်းအား လမ်းအကျယ်ချဲ့ ခြင်း၊ ကတ္တရာခင်းခြင်း တို့ကို ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက ဆောင်ရွက်နေ-(ခရမ်းစိုးမြင့် ၊ဓာတ်ပုံ-ကျော်မိုးလွင်)… မြတ်နိုးလေးစား တန်ဖိုးထားရမည့် အမျိုးသားနေ့ (ပန်းတောင်းသန်းကြွယ်)
Format/size: pdf (1.09 MB); Font: Myanmar3
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ လှပသည့်အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်စေရန် ထုဆစ်ပုံဖော်ပေးနေသူများမှာ မိဘများပင်ဖြစ် အမျိုးသားပညာရည်မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ အောင်မြင်ရန်အတွက် မိဘများ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုသည် အရေးပါ၊ သားသမီးများကို လူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖြစ်လာ အောင် ထိထိရောက်ရောက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေး... လားရှိုးမြို့ နယ်မြေခံတပ်ရင်း အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစ ဝင်များနှင့် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကျော်ဇော တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား... ရုံးလုပ်ငန်းအထောက်အကူပြုကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့် ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြင့် တက်ရောက်အမှာစကားပြော... မုဒုံမြို့ အထက(၁) မြတ်ဆရာပူဇော်မည်... မိုးစပါးအထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေး မင်းလှမြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း.. နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက် မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်နှင့် ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းတို့ ကြည့်ရှု အားပေး...Eco Echo Exhibition ပြပွဲ Supercool ကားတာယာပြခန်း ပါဝင်ပြသ...အလက(၂)သာကေတ မြတ်ဆရာပူဇော်မည် မြန်မာ့စစ်ရေးသမိုင်းဝင် ကိုယ်တွေ့ ကွမ်းလုံရက်ပေါင်းလေးဆယ် တိုက်ပွဲစဉ် စာအုပ်ဖြန့်ချိ... ရေဦး အထက( ခွဲ) ရွှရတနာ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဖွင့်ပွဲ.... ဘူမိဗေဒကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ အဌမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်...မြန်မာနိုင်ငံ သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(၁၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီ အစည်း အဝေးကျင်းပမည်... မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများ၏Electronics & Automobile Show 2010 ဖွင့်ပွဲ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ တက်ရောက် ... မန္တလေးမြို့ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး နှလုံးဆေးကုဌာနသို့ နှလုံးစမ်းသပ်ပစ္စည်းလှူဒါန်း ... တိုင်းမူးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်အေး တက်ရောက်... ရွေလီ(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းအတွက် ကန်ထရိုက်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ... အလယ်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန်တိုးလာနိုင်...ဝ၁ဝ ခုနှစ် (၄၉)ကြိမ်မြောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖလား တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပထမအဆင့်အုပ်စုပတ်လည်ပြိုင်ပွဲများ ဆက်လက် ကျင်းပ... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ ကတ္တရာထပ်ပိုးလွာခင်း... Calsome ကွေကာမှ မိသားစုများ စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွင်ဖွယ်ရာ ပြိုင်ပ များကျင်းပ... မြို့သာယာလှပရေးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေး..... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ အာဆီယံ-တရုတ် လူငယ်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ အမျိုးသားပြတိုက်လေ့ လာ... အမျိုးသားဇာတ်ရုံ၌ နိုင်ငံအလိုက် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်... ဟင်္သာတမြို့ အထက(၁) (၃၅)ကြိမ်မြောက်(ကျောက်စိမ်းရတု) အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာ-ဗီယက်နမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့် တက်ရောက်..... အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ဖြင့် တက်ညီလက်ညီပါဝင်..... ဆောင်းပါး။ ။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းကြပါ -ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင့်ဆွေလတ်-(စီမံချက်မန်နေဂျာ)... ဘဝအနေမြင့်၍ အခြေတင့်လျက်ရှိသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ သတင်းဆောင်းပါး - တင်ထွေး(သတင်းစဉ်) ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - ကိုထွေး.....
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ရှိပြီးဖြစ်သည့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက် နိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နေရာဒေသတွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ ဒေသစွဲ၊ လူမျိုးစွဲမထားရှိဘဲစစ်မန်သည့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မိမိတို့ ကျရာအခန်းကဏက တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်.. တည်ငြိမ်အေးချမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်(အယ်ဒီတာ့အာဘော်) လက်တွဲဖော်ဆောင်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးထွဋ် ကေတုမတီ မြို့တည်နန်းတည် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့်ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် စျေးပွဲတော်နှင့် ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်... Eco Echo Exhibition ပြပွဲ၌ Acer ရွေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီ ပါဝင်ပြသမည်... တောင်ကြီးကောလိပ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဒွါဒသမအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၌ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ဒေသဖွံ့ ဖြိုးမှုများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ...မုံရွာမြို့ အထက(၁) (ယခင် ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း) အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အာဆီယံ-တရုတ် လူငယ်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန် )၌ အနုပညာဆိုင်ရာများ လေ့လာ... Eco Echo Exhibition-EEE (2010) ကုန်စည်ပြပွဲ၌ အပန်းဖြေ၍ စျေးဝယ်နိုင်... နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... ပြည်တွင်း ပြည်ပရတနာကုန်သည်များ ကျောက်စိမ်းအတွဲများကို တင်ဒါစနစ်၊ စျေးပြိုင်စနစ်တို့ဖြင့် အပြိုင်အဆိုင်ဝယ်ယူ... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးအနည်းငယ် ဆက်လက်ရွာနိုင်... မသန်စွမ်းသူများ ဝှီးလ်ချဲဖြင့် ရန်ကုန်မှ နေပြည်တော်သို့ ခရီးထွက်မည်... အထက အင်းမ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇေယျာအောင် ပန်ဝါမြို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... တရားဝင်သစ်မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံ ချက်ပြုစနစ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ...ခရမ်းဘိုးဘွား ရိပ်သာ အဘိုးဆောင်သစ် အုတ်မြစ်စီမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပ... ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်) ပညာသင်ထောက်ပံ့ဆု လျှောက်ထားနိုင်... မြန်မာအားကစားအသင်း ကြေးတံဆိပ် တစ်ခု ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... တိုင်းမှူး တံခွန်စိုက်ဒိုင်း သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးလွင် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ တက်ရောက်... အထက(၁) ပုဇွန်တောင် မြတ်ဆရာပူဇော်ကန်တော့ ပွဲ ကျင်းပမည်... ရွေလီ( ၂ ) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ဘီးလင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့ အတွက်သဘောတူညီမှုစာချွန်လွှာနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ... ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းကြီးများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာအတွက် အခမဲ့ပညာသင်ဆု ရွေးချယ်ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာတတ်မြောက်ရေး သင်ကြားပေးသည်သာမက အတွေးအခေါ် မှန်ကန်ရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ရေး၊ စည်းကမ်းကောင်းသူများဖြစ်ရေး ပြညထောင်စုစိတ်ဓါတ် ရှင်သန်ထက်မြက်စေရေးတို့ကိုပါ လေ့ကျင့်သင်ကြားစေရေးတို့ကိုပါ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေး... မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ ဗဟိုအမှုဆောင်ကော်မတီ ၁၁/၂ဝ၁ဝ) အစည်းအဝေး ကျင်းပ... နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁၄ဝ) ဒီဇင်ဘာလထုတ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... အထက ဆိပ်ဖြူ ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်မည်... အထက(၃) သာကေတအာစရိယပူဇော်ပွဲ အကြိုညှိနှိုင်း... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်... မုံရွာစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကောလိပ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ အာစရိယ ပူဇော်မည်... အမြို့ မြို့အနယ်နယ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်... အထက(၁)လှိုင် မြတ်ဆရာ ပူဇော် ကန်တော့ ပွဲကျင်းပမည်... အထက(သရက်ချောင်း) မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အထက(၄)စမ်းချောင်း အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် မိတ်ဆုံပွဲကျင်းပမည်... အထက(သရက်ချောင်း) မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်...၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်(၄၉)ကြိမ်မြောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖလား တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပထမအဆင့် အုပ်စုပတ်လည်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပ... တင်ညွန့်၏ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားစာအုပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... ပြင်ဦးလွင်နှင့် ရတနာပုံမြို့သစ်အတွက် သောက်သုံးရေနှင့် စိုက်ပျိုးရေဖူလုံစေရန် ပွဲကောက်ရေလွဲဆည်တည်ဆောက် -သတင်းဆောင်းပါးနှင့်ဓါမှတ်တမ်း-ခင်မောင်သန်း(စက်မှု)...WISE မှ ABE Diploma သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ...
Format/size: pdf (1.19 MB); Font: Myanmar3
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မည်သည့်အစိုးရ တာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲဆောင်ရွက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်အခြေခံသည့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုစွမ်းအားဖြင့် အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားရေးကို သားစဉ်မြေးဆက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်... Eco Echo Exhibition (EEE) တွင်TRUE VALUE မှနည်းပညာများ Solutions များပြသမည်...နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်မသုံးစွဲရနေ့...တရုတ်-အာဆီယံလူငယ်ချစ်ကြည်ရေးစခန်းချပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်ကြည့်ရှုအားပေး...နယူးဇီလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ်သံအမတ်ကြီး ဦးပေါ်လွင်စိန်အားခန့်အပ်...အင်အားအနည်းငယ်ရှိမြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ရှား...ပီတိကိုမျှဝေပါတယ် (ဆောင်းပါး-ဒေါက်တာဝင်းနိုင်)... (၉ဝ)ပြည့်နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ဦးတည်ချက်များ... နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်ကား မြန်မာကျောက်စိမ်းကို ပြည်ပရတနာကုန်သည်များ အကြိုက်တွေ့...ယုံကြည်ချက် ခံယူချက် ပြည့်ဝအောင် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်(အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... ဝန်ကြီး ဦးသိန်းညွန့် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ... စာရင်းစစ်များ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ... နေပြည်တော်-မန္တလေး-နေပြည်တော် မိုင် ၃၉ဝ ခရီးရှည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး စက်ဘီးပြိုင်ပွဲတွင် ဆုကြေးငွေများ ထိုက်တန်စွာချီးမြှင့်မည်...မြန်မာအားကစားအသင်း ကြေးတံဆိပ်တစ်ခ ုထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများမဖြစ်ရန် ကြိုတင်စီမံထား နိုင်ငံတော်က ထုတ်လွင့်ပေးသည့် သတင်းများကို ဂရုပြုလိုက်နာ အခိုင်အမာအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်နေထိုင်သည့် လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲ... MFF Tiger Futsal Cup 2010 ပွဲစဉ်ရေးဆွဲပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ...ကေတုမတီ (တောင်ငူ ) မြို့တည် နန်းတည် နှစ်( ၅ဝဝ)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နယ်စပ်ဖွံ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဒုတိယ ညွန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မြန်မာနိုင်ငံ ပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တတိယ(၃)နှစ်သက်တမ်း အလုပ်အမှုဆောင်သစ်များ ရွေးချယ်မည်... နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အသင်း ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည်... ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာ ဦးစီးဌာနနည်းပညာ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်/သိပ္ပံများ၏၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းဖွင့်ရက် ကြေညာခြင်း... ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၏ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းဖွင့်ရက်ကြေညာခြင်း
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံသားတိုင်း အခြေခံပညာ ကောင်းစွာတတ်မြောက်ပြီး တိုးတက်လာသည့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာအကူအညီဖြင့်အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သည့်နိုင်ငံတော် အဖြစ်တည်ဆောက်ကာကွယ်နိုင်မည့်သူများပျိုးထောင်... ကလေးဒေသတွင် လမ်း၊ တံတားများ ဝေဆာ၍ မြို့ရွာများ ဖွံ့ဖြိုးလာ... လေဖြတ်ရောဂါအကြောင်းသိကောင်းစရာ- ဒေါက်တာဖြူဖြူလေး (တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဦးနှေက်နှင့်အာရုံကြော)... ရာသီပြောင်းချိန် တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာမှု ဂရုပြု... ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်မြင့်အားဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံမှ ဧည့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံမြန်မာ-ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ... ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် ဖြန့်ချိ... အထက(၄) အလုံ(ယခင်ကူရှင်ကျောင်း)ကျောင်းသားဟောင်းများ... အာစရိယပူဇော်မည် သင်တန်းသူ ၂ဝဝ ဆံ့ နှစ်ထပ်ဆောင်သစ်နှင့် စိမ်းလဲ့ကန်သာ ဧည့်ဆောင်သစ် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဆဋမအကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... အိမ်မဲမြို့ မြို့မကျောင်းမြတ်ဆရာပူဇော်မည်... ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဘိန်းစိုက်ရာသီအတွင်း ဘိန်းခင်းစုစုပေါင်း ၇ ၃ ဒသမ ၉၅ ဧက ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်... ဆူးလေအမှတ်(၅)တံတားနှင့်ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... နဝဒေးတံတား (ပြည်) ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်... အလက(၄)ကြည့်မြင်တိုင် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... မီးသတ်ဦးစီးဌာန ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃/၂ဝ၁ဝ)ဖွင့်လှစ်... ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ် ထွက်ရှိ... ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုလေ့လာ... ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်(၁၉၇၂-၇ ) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်...နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်... ကျောက်စိမ်းဥယျာဉ်အတွင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး မြန်မာနိုင်ငံတွင် HIV/AIDS ရောဂါကာကွယ်ရေး၊ကုသရေး၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များအား သတ်မှတ်ထားသော အထူးကုဆေးရုံကြီးများတွင် ကုသပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် NGO/INGO အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ကုသရန်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိ၊ ဒေါ် ဖြူဖြူသင်း ဦးစီးသည့်အဖွဲ့မှ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်လုံးတွင်HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေမှုသည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများကတွေ့ဆုံ၍ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့... အထက(၁) ဒလ မြတ်ဆရာပူဇော်မည်... ဂီရိ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေနှင့် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း... အထက်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန်လျော့နည်းနိုင်... ကညင်ရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဝန်ကြီး ဦးဌေးဦး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး...အာဆီယံ-တရုတ်ချစ်ကြည်ရေး လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရောက်ရှိ... ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ(၁၅)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း အမ်း-မင်းဘူးကားလမ်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... အမြို့ မြို့အနယ်နယ်တွင် ဖွံ့ ဖြိုးစည်ပင်... မန္တလေးမြို့မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများနှင့် ဘဏ်သင်တန်းကျောင်းဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ရိုးရာလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွေဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... မြို့သာယာလှပရေးနှင့်မီးဘေးကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်... တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဆုပေးပွဲ- သတင်းမှတ်စု - နိုင်ထွန်း(တောင်ကြီး) ထူးခြားသည့်ညအပူချိန်များ... နောက်နှစ်ရက်အတွက် ခန့်မှန်းချက်...
Format/size: pdf (1.45 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၀
Description/subject: ပြည်တွင်းသတင်း။ ။ ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့် ပြင်ဉီးလွင် - မိုးကုတ်ကားလမ်းသစ် ၉၇ မိုင် ၇ ဖာလုံအား ကတ္တရာလမ်း အဆင့်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဗီဒီယိုဆင်ဆာမူရင်းကွဲလက်မှတ် အသေးကပ်ထားသော ဗွီစီဒီ၊ ဒီဗွီဒီနှင့် လေဆာဓာတ်ပြားများကိုသာ အသုံးပြုရေးနှင့် ခိုးချပ်၊ ပွားချပ် လျော့နည်းပပျောက် စေရေး ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ... ယနေ့ခေတ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏လမ်းများ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် စာအုပ်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိ... အထက(၃)ဗဟန်း မြတ် ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်...၂၁ ရာစု စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွားပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေ ရေး မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအား အမျိုးသားရေး ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက် ပြည့်ဝသူများအဖြစ် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်... အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည်... မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... မြန်မာနိုင်ငံ ငါးမွေးမြူရေးလုပ် ငန်းရှင်များအသင်း၏ တတိယ (၃ )နှစ်သက်တမ်း အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ်မည်... တရားသူ ကြီးချုပ် ဦးအောင်တိုး တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုဆုပေးအပ်ပွဲနှင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ပွဲ တက်ရောက်၍ ဆုများပေးအပ်... (၂၂)ကြိမ်မြောက် မျက်စိဆရာဝန်များ ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ... Website ဖန်တီးရေးသား လိုသူများအတွက် သင်တန်းဖွင့်မည်... တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာပိုင်အန်းဖေ ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရောက်ရှိ... First Myanmar Investment Co.,Ltd. နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်း အဝေးကျင်းပ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံ လူသစ်တန်း ခရစ်ကက်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... KMD မှ ဆောင်းရာသီ အထူးစျေး ရောင်းပွဲ ကျင်းပမည်... မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်နှင့် အခြေခံပညာ ကျောင်းများ ဝန်ကြီးဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာပိုင်အန်းဖေ ခေါင်းဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိ... ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဘာသာရပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးဟောပြောမည်... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်း ကေတုမတီ(တောင်ငူမြို့) မြို့တည်နန်းတည် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မြန်မာ့ရိုးရာ လှေလှော် ပြိုင်ပွဲနှင့် နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ တက်ရောက်အားပေး... နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) သဲကုန်းမြို့နယ် ကိုယ်ကြီးမြှုပ်ကျေးရွာ ကိုယ်ကြီးမြှုပ်ကျောင်း ပဓာနနာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ပညာဇောတ (အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ) ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း အမြို့ မြို့အနယ်နယ်တွင် ဖွံ့ ဖြိုးစည်ပင်...BCB Centre မှ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည် ... အထက(၂)မင်္ဂလာဒုံ(အောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်းကျောင်း)အာစရိယပူဇော်မည် ကျိုက္ကော်-သိမ်ဆိပ် တိုက်နယ်တွင်းရှိ မူလတန်းကျောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည် ... ဘားအံမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်) နှစ်ပတ်လည်စည်းဝေးမည်... တောင်ပိုင်းဒေသများ မိုးအနည်း ငယ်ရွာနိုင်... ပဲခူးဒီဂရီကောလိပ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ရေစကြိုမြို့နယ်၌ မိုးစပါး အထွက်နှုန်းမှန်ကန်ရေး စံကွက်ရိတ်သိမ်း... အင်္ဂလိပ်စာမိသားစု အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည် ... ဖျာပုံမြို့(၅)လမ်း စံပြအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း ဒုတိယအကြိမ် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်း ပမည်... တစ်ချက်တည်း ကျင်းဝင် ၁၉၈၃ ခုနှစ် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည်... နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ။ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရဦး တင်အောင်မြင့်ဦး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကွမ်ရှီးကျွမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ပါတီကော်မတီ အမြဲတမ်းကော်မတီဝင် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး မစ္စတာ ချန်ဝူး ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ ။ ရေထွက်ပစ္စည်းများ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်တင်ပို့(အယ်ဒီတာ့အာဘော်) ... အထက(၁)ပန်းဘဲတန်း (စိန်မေရီ)ကျောင်း မြတ်ဆရာ ပူဇော်မည်... ဆောင်းပါး။ ။ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး H.E. Mr.Bai Enpei ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (သတင်းဆောင်းပါး - ဆုနှင်းလဲ့ ဦ ဓာတ်ပုံ - အောင်အောင်)
Format/size: pdf (1.40 MB); Font: Myanmar3
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. STI မှ Seminar on Marketing Management ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်...နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆက်လက် ကျင်းပ တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ကျောက်စိမ်းအတွဲပေါင်း ၁၄၉၅တွဲ စတင်ရောင်းချရ...အောင်ထက်မြတ်ကုမ္ပဏီမှနှစ်သစ်အကြို ရန်ကုန်တာယာများရောင်းချ...တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် (သာမညဖလအခါတော်နေ့) ကုသိုလ်ပုညပြုကြသူများဖြင့် စည်ကား... ဝရဒါဌာဓာတုစေတိယ စွယ်တော်မြတ်စေတီတော်(ရန်ကုန်) (၁၅)ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်၊ ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင်ပွဲ၊ ရွေကြာသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲနှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ ကျင်းပ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ တက်ရောက်ကြည်ညို ရွေကြာသင်္ကန်းနှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုဖော်ဆောင်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွန်းဦးတိုင်းမှူးဒိုင်းသေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲတက်ရောက်... ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် လားရှိုးမြို့ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးရုံး၌ လမ်းအထူးအဖွဲ့၊ ခရိုင်အဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်အဖွဲ့များမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ... အထက(၇)မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယ ပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... မြတ်တဲ့အလှူပွဲရာဇာ ညွန့်ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဆွေ မြေနီကုန်းရှိ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နည်းပညာနှင့် သုတေသနအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်... မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးရွာနိုင်... ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေ ကြွယ်စေဖို့သဘာဝတောတွေ ထိန်းသိမ်းစို့... နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ ပျော်ပွဲ ရွင်ပွဲ ကျင်းပမည်... အထက(၂) မအူပင် ကျောင်းအဝင် ကတ္တရာလမ်းဖွင့်... စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အာစရိယပူဇော်မည်... မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... ဓာတုဗေဒမိသားစု သတ္တမအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ဝန်ကြီး သူရဦးအေးမြင့် ဦးဆောင်သော မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ကျင်းပသည့် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် အာရှအိုလံပစ်ကောင်စီ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိ... ကူးစက်ရောဂါကပ်အသွင်ဖြစ်ပွားမှုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ... ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်(ပြည်တွင်း၌ကျပ်ငွေဖြင့်သာ ခန့်ထားရန်)... ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့နယ်မှ နမ့်ကျန်ရေလှောင်တမံ- သတင်းဆောင်းပါးနှင့် ဓာတ်ပုံ-ခင်မောင်သန်း(စက်မှု)... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ...
Format/size: pdf (1.27 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစခန်းမှူးရုံး မိသားစုဘုံက ထိန် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်း(သတင်းဆောင်းပါး - ခရမ်းစိုးမြင့် ဓာတ်ပုံ - ကျော်မိုးလွင်)... နက္ခတ်စုံညီ ကြည်လင်ရွန်းမြ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည... သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန အမှုထမ်းအဆင့် အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသင်တန်းဖွင့်... နယ်စပ်/စည်ပင်ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းနှင့် စာရေးဝန်ထမ်း သင်တန်းများဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ... မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဖိုရမ်တက်ရောက်ရန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ... မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်ပုံအသင်း နှစ်(၆ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဓာတ်ပုံအနုပညာပြပွဲ ကျင်းပ... စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ... ကျောင်းကြက်ခြေနီ ဆရာ၊ ဆရာမများ အသိပညာပြန့် ပွားရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ ဆရာ၊ ဆရာမများ မီးသတ်ဦးစီးဌာနသို့ လေ့ လာ... သာမညဖလ၊၊ သုတ္တန်လှ ဟောပြတန်ဆောင်မုန်း- ဖိုးရန်နိုင်(ကျောက်ကြီး)... သာမညဖလအခါတော်နေ့-ကဗျာ-ဦးအောင်မွန်(မဟာဝိဇ္ဇာ)... နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ ကျောက်မျက်အတွဲပေါင်း ၃၁ တွဲ ရောင်းချရ... GALLANT Training Centre ကအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာဘာသာရပ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ... သတိပေးနှိုးဆော်ချက်...အောက်တိုဘာလအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု(၁၆၇)မှု တရားခံ(၂၉၃)ဦး ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့... ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ် ထွက်ရှိ...တိုင်းမှူးဒိုင်း သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွန်းဦး တက်ရောက်... ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ရှေးဟောင်းသမိုင်းအထောက်အထားများ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပ... ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သင်္ချာမိသားစုအာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား အမှတ်စဉ်(၁)၏မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲနှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲကျင်းပမည်... ရန်ကုန်စက်မှုတကသိုလ်(၁၉၆၄-၆၅) ပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ ဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်မည်...မန္တလေးမြို့ အိမ်တော်ရာဘုရားဝင်းအတွင်း၌ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွား အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်လျက်ရှိ... မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Franchising ဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်... ၂ဝ၁ဝခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက် AIDS ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့... အမြို့ မြို့အနယ်နယ်တွင် ဖွံ့ ဖြိုးစည်ပင်... ပြွန်တန်ဆာမြို့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်နေမှုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးထွဋ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဟင်္သာတ GTIတတိယအကြိမ်အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသများ မိုးရွာနိုင်... Myanmar Singapore Medical Friendship Mission 2010 အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်နှင့် ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ... နေပြည်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် နေပြည်တော်-မန္တလေး-နေပြည်တော် မိုင် ၃၉ဝ ခရီးရှည် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာအားကစားအသင်းငွေတံဆိပ်တစ်ခု ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... ကမ္ဘာ့AIDS နေ့ အထိမ်းအမှတ်စကားဝိုင်းနှင့် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပရေးစီစဉ်... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဆဋမအကြိမ်မြောက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ... အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)ဖွင့်ပွဲနှင့်ရွေရတနာ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် ပညာရေးဌာနသို့ လွဲပြောင်းပေးအပ်... မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့ ်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ စာဆိုတော်နေ့အထိမ်းအမှတ် သက်ကြီးစာပေပညာရှင်များကန်တော့ပွဲ ကျင်းပရေးစည်းဝေး... မဂ္ဂဇင်း စာမူရေးသားသူများအား ဂုဏ်ပြု... အလက(ခွဲ) သောင်ကြီး (၈)ကြိမ်မြောက်ပညာရည်ချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပမည်... အလက(၂)တာမွေ အဌမအကြိမ်မြတ်ဆရာပူဇော်မည်... ခြိမ့်ခြိမ့်သဲဆင်နွဲ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပွဲ... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ... နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်...
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. အက်မက်စ်နိုင်ငံများအကြား ရှိပြီးဖြစ်သော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသသည့် ဆက်ဆံရေးများမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံချင်းအလိုက်နှင့် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ဒေသ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် အစည်းအဝေးဖွင့် ပွဲတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြား... (၄)ကြိမ်မြောက် ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖရား-မဲခေါင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ဆွေးနွေး ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ကြိုးပမ်း... သတင်းဂျာနယ် ထွက်ရှိ... မိမိတို့၏ ကတိကဝတ်များကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အက်မက်စ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ အား ပိုမိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်... ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေအားပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ... အထက(ဒါးပိန်) အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပမည်... ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြား ဆွေးနွေးပွဲ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြား... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အားလာအိုနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်နှင့် ACMECS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ ကမေ္ဘာဒီးယားဘုရင်အား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ... ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ် ဖြန့်ချိ... နယူးမန္တလာထွန်း အဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးစုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲအဖြစ်အလှူဒါနပြုမည်... မြန်မာအားကစားအသင်းငွေတံဆိပ်တစ်ခုထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် ကြည့်ရှုအားပေး... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ...အထက(၂)တာမွေ(ယခင်တာမွေတန်းမြင့်) မြတ်ဆရာပူဇော်မည်...မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဉဏ်ရည်မမီသူများ အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပ...အလှမွေးငါးမွေးမြူ ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ ပထမအကြိမ် အလှမွေးငါးပြပွဲနှင့် ငါးအလှပြိုင်ပွဲဖွင့်... (၅)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် (၄)ကြိမ်မြောက် အက်မက်စ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ရန် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါခဲ့သော နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးစိုးသာ သက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများသို့ တက်ရောက် မြန်မာအသင်း ဂိုးပြတ်အနိုင်ရ...အောက်ပိုင်းဒေသများ ညအပူချိန် အနည်းငယ်တိုးလာနိုင်... ကျီးသဲ အထက အဌမအကြိမ်မြောက်မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်...ပုသိမ်ဒေသကောလိပ် ကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... ဘီးလင်းမြို့နယ် မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း... Smart Electronic Dictionary အတွင်းပါရှိသော စကားပြော အသံနှင့်ပတ်သက်၍ အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း... ရောင်နီပျိုးစာကြည့်တိုက် လောင်းလုံ၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ၊ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲတက်ရောက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ...ကြိုတင်ဆန္ဒမဲနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအစဉ်အလာ (ဆောင်းပါး-ဥပဒေလေ့လာသူတစ်ဦး)...စိန်ဂေဟာဆိုင်ခွဲများတွင် ပြုလုပ်မည့်အရောင်းပွဲအစီအစဉ်...ACMECS BUSINESS FORUM သို့ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေး...
Format/size: pdf (1.50 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ စီအယ်လ်အမ်ဗွီနှင့် အက်မက်စ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်... ပွင့်လင်းရာသီ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ကြိုးပမ်း (အယ်ဒီတာ့ အာဘော်)...အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ တီဘီနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနှင့် ကမ္ဘာ့ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ် ရေးထိုး...KNU အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖျက်သမားများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းနင်းမိ၍ ဒေသခံပြည်သူနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ... Myanmar Engineering Society, MES နှင့် Concordia Int'l Co., Ltd. တို့ပူးပေါင်း၍ MES Quality Control Laboratory ဖွင့်လှစ်... တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ချိန်ကိုက်မိုင်းထောင်ထားရှိမှုအား တာဝန်ရှိသူများက အချိန်မီဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သေကျေထိခိုက်ကြရမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၊ အဖျက်အမှောင့်သမားများနှင့် နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုသူများက အကြမ်းဖက် အဖျက်လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိပါက တာဝန်ရှိသူများထံ အချိန်မီသတင်းပေးပို့ ကြရန် သက်ဆိုင်ရာက သတိပေးနှိုးဆော်ထား ...နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သိန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန် နှင့်ဇနီးတို့ကတည်ခင်း ဧည့်ခံသောဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်...How To Get Clients/Customers To Come To You သင်တန်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပမည်...မြန်အောင်မြို့ ၌ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားနေအိမ်ငါးလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့...နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား ဖနောင်ပင်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးနှင့် စစ်သံရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများက ဂါရဝပြုနှုတ်ဆက်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ပြေး၊ ခုန်၊ ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်... ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဇော် ရတနာပုံမြို့သစ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း )သင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူ... မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဆဌမအကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်... MFF Futsal Tiger Cup 2010 ဖူဆယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပမည်... GLORY မှ ရုံးချိန်ပြင်ပ အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာ အထူးတန်းခွဲများဖွင့်မည်... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ... ၂ဝ၁ဝခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီနာယက သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ကြည့်ရှုအားပေး... ရောင်းချမည့်ပုလဲအတွဲများကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ မြို့တော်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဝန်ကြီး ဦးလွန်းသီအား ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ... အောက်ပိုင်းဒေသများ မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်... အချစ်လားလာထားဇာတ်ကား ဆက်လက်ပြသ... ကျောက်ဖြူမြို့ လေဘေးသင့်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကေတုမတီ(တောင်ငူ ) မြို့တည်၊ နန်းတည်နှစ်( ၅ဝဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြန်မာအားကစားအသင်း ငွေတံဆိပ်တစ်ခု ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးကာကွယ်ရေးအထက(၄) သာကေတ၌ ဟောပြော... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်(၅)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့်(၄)ကြိမ်မြောက် အက်မက်စ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဖနောင်ပင်မြို့သို့ ရောက်ရှိ... ဘဝရှေ့ဆောင်စာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံသစ်ဖွင့်လှစ်... ကုန်စည်ပြပွဲများ အပြန်အလှန်ကျင်းပနိုင်ခြင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်နိုင် စီအယ်လ်အမ်ဗွီနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အာဆီယံပေါင်းစည်းရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကျန်ရှိနေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များကိုလ ည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည့်အခြေအနေရှင်းလင်းပြောကြား... ထင်မှတ်ထားသည်ထက် ပိုကြည့်ကောင်းခဲ့သော မြန်မာနှင့် Dalian အသင်းတို့ ခြေစမ်းပွဲ ယနေ့ ညနေတွင် ထပ်မံအကဲစမ်းဦးမည် သုံးသပ်ရေးသားသူ-စိုးမိုး (IBC) ဓာတ်ပုံ-ဇာနည် (MFF)... မိမိတို့၏ လူမှုစီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုသာမကအာဆီယံ နှင့်ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၏ အကူအညီများရရှိရေးအတွက်ပိုမိုတိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကျင်းပမည့် မဏိ ရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမအနီး ၂၁ ဒသမ ၇ ဧက ကျယ်ဝန်းသော မြေ ကွက်လပ်တွင် တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲ တွဲ၊ စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည့် ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၃၇ဝ စုစုပေါင်း ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၉၁၅၇ တွဲကို ခင်းကျင်းပြသထားပြီးဖြစ် ။... နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အားပေးချီးမြှင့် မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမ ရေပန်းကို စက်ခလုတ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေး... မြေလွတ် မြေရိုင်းများ တိုးချဲ့ဖော်ထုတ် သဘာဝမြေသြဇာများ ပိုမိုထုတ်လုပ်သုံးစွဲ... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး အလှူငွေပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်... မန္တလာမင်း အဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး လိုင်းသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အလှူဒါနပြုမည်... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ စတင်ကျင်းပ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရတနာကုန်သည် ၅၆၂၉ ဦး ရောက်ရှိ... မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အောင်မြင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကုန်စည်ပြပွဲ၊ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲ - ၂ဝ၁ဝ ကျင်းပမည် အက်မက်စ်နဲ့ စီအယ်လ်အမ်ဗွီနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ- ရေးသူ- တက္ကသိုလ်ဟန်စိုးဦး... အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ဖော်ပြချက်အားပယ်ဖျက်ခြင်း... အထက(၄) ပဲခူးကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများအာစရိယပူဇော်မည်... လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အားပျော့ပျက်ပြယ်... မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းကို ဒါလီယံရှီဒီအသင်း အနိုင်ရ-သတင်းမှတ်စုနှင့် ဓာတ်ပုံ - ရှိုင်းထက်ဇော် ဆုရဟော်ကီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ... ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော PGa 21 Ca (Water Treatment Flocculant) ရေကြည်ဆေးမှုန့်အကြောင်း စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်း မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ... မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များ...ဗီဒီယိုဆင်ဆာမူရင်းကွဲလက်မှတ်အသေးကပ်ထားသော ဗွီစီဒီ၊ ဒီဗွီဒီနှင့် လေဆာဓာတ်ပြားများကိုသာ အသုံးပြုရေးနှင့် ခိုးချပ်၊ ပွားချပ် လျော့နည်းပပျောက်စေရေး ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြပွဲအကြိုခင်းကျင်းပြသထားမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရတနာကုန်သည်များ တည်းခိုနေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေးနှင့် သွားလာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လမ်းညွန်မှာကြား... ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာပါတီအသီးသီးသို့ အကြောင်းကြားစာများပေးပို့... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာ... ဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်မြင့်အား ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ ဒုတိယဌာနေကိုယ်စားလှယ် လာရောက်တွေ့ဆုံ... မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပမည...် ဧရာဝတီမြစ်ကူး စစ်ကိုင်းတံတား (အင်းဝ) ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ... ကောလင်းမြို့ ရေမြောင်းများစုပေါင်းရှင်းလင်း... ဓနုဖြူ-ကျုံတနီးလမ်းပိုင်းရှိ တံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်မောင်ဝင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... နေပြည်တော်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... MAXXIS Tires ၏ (၉)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ... မြန်မာ့ ဂုဏ်ရည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၃၇) ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်သင်တန်းများဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလွင် တိုင်းမှူးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်... မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းဖွင့်... ပဒေသာပင်သီးရန်၊ သိမ်ဆင်းလောင်းရန်Shine သွားတိုက်ဆေးများ အထူးစီမံရောင်းချ... ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်(၁၉၇၂-၁၉၇ )အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိသုကာကျောင်းသားဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်မည်... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိ... လှူကထိန်သင်္ကန်းနှင့် မဂ်လမ်းကိုတဲ့ ဆုပန်ရွယ် (ဆောင်းပါး-ရှိန်အောင်ဗိုလ်) အခြေခံအမျိုးသမီးဝတ်စုံ စက်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်... ပြည်သူများ စိတ်ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွင်စွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန် ဘက္ကရီအီးဒ်နေ့တွင် လှော်ကားဥယျာဉ် ဖွင့်လှစ်ထားမည်... ဝန် ကြီးဦးဇော်မင်းအထက် ပေါင်းလောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့်နန်ချိုရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မြန်မာအားကစားအသင်း ငွေတံဆိပ်တစ်ခု ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိ... ရိုးရာလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ... ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ် ထွက်ရှိ... ကေတုမတီ(တောင်ငူ )မြို့တည်နန်းတည်နှစ်(၅ဝဝ)ပြည့်ပွဲ ကုန်စည်ပြပွဲ၌ Nano Energizer အရောင်းပြခန်း ပါဝင်ပြသ... ဝန်ကြီး ဦးဌေးဦးအား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ... အမြို့ မြို့ အနယ်နယ် ဖွံ့ ဖြိုးစည်ပင်... စာဖတ်ခြင်းနှင့် ကြီးမြတ်သောလူမျိုး(စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ စုစည်းတင်ဆက်မှု) စာအုပ် ထုတ်ဝေ... သိပ္ပံစိုးလှ၏ တစ်နှစ် ၃၆၅ ရက် ကျန်းမာနည်းစာအုပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဆက်လက်တည်ရှိနေ... ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်အချပ်ပို(၂၄) မျက်နှာပါရှိ... GIS နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ Basic နှင့် Intermediate Levelသင်တန်းဖွင့်မည် ... MAXXIS Tires ၏(၉)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခန်းအနားကျင်းပမည်...အားလက်ရက်တွင်အေးဆေးစွာဝယ်ယူနိုင်မည့် KMD ကျင်းပမည်...
Format/size: pdf (1.35 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... အမျိုး သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း ကြေညာ... တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း ကြေညာ... တောင်ပိုင်းဒေသများ မိုးဆက်လက်ရွာနိုင်... ကျန်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းများအားဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်... ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၇) ဖွင့်လှစ်မည... ဆဇူကီး ဖလားပွဲဝင် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် ခြေစမ်းကစားမည့် တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ဒါလီယံအသင်းရောက်ရှိ...Orange Supermarket ၏ Korea Food Fair 2010 ဥှ၍္:၌ ... အများပြည်သူသိရှိရန်အသိပေးနှိုးဆော်ချက်... ကိုရီးယားအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများသတိပြုရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အသိပေး... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်... ထူးခြားသည့်ညအပူချိန်များ... နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ ( ၅ )ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ် ဗွီထိပ်သီးအစည်း အဝေးနှင့်(၄)ကြိမ်မြောက်် အက်မက်စ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန် ထွက်ခွာသွားသော နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အား ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်... မိုးစပါးများ အချိန်မီ ရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့ သိုလှောင် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း ပေါက်တောမြို့နယ်နှင့် မြေပုံမြို့နယ်တို့၌ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း၌ ဟောပြောပွဲကျင်းပမည် ကျေးရွာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စာကြည့်တိုက်များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း စာအုပ်၊ စာစောင်များလှူဒါန်း... ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် ဖြန့်ချိ... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် စက်မှုလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး(စံပြ)အထူးဇုန်၌ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့နေမှုများ ကြည့်ရှုအားပေး... မြန်မာနယူးစ်ဝိခ်ဂျာနယ် ဖြန့်ချိ... ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ ကျင့်ရေးကျောင်း (TTC) ဒသမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့်မိတ်ဆုံစားပွဲကျင်းပမည်... နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြပွဲကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ တတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ... TV Guide ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ... ကိုရီးယားသို့ အလုပ်သမားများစေလွတ်ရန်နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုး စာရင်းရေးသွင်းထားသူအလုပ်သမား ၁၇၇၁ ဦးရှိ... ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ အာဆီယံပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ... ဟိုချီမင်း-ရန်ကုန်-ဟိုချီမင်း လေကြောင်းခရီးစဉ် စတင်ပြေးဆွဲခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ... ဂီရိမုန်တိုင်းသင့်ဒေသများရှိ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ... ကတ္တရာကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးခင်းနေမှုရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... 'မုန်း’အားမာန်ကိုထုဆစ်ခြင်း(သို့) ကြီးကြီးဝဒိုင်ယာရီ (သတင်းဆောင်းပါး-ဇော်မိုးသောက်၊ ဓာတ်ပုံ-ခင်မောင်ဝင်း(ကြေးမုံ))... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်... ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်အချပ်ပို (ဂ)မျက်နှာပါရှိ
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ ကျန်ရှိသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏အမည်စာရင်းအားဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်... 2nd JAPAN CUP KARADEO CHAMPIONSHIP 2010 ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည် ... KNU အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖျက်သမားများ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်ခွဲသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူအချို့ဒဏ်ရာရ ... မြို့ပြဝန်းကျင် သန့်ရှင်းလှပရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်မောင်ဝင်း ပုသိမ်မြို့တွင်း လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မီးသတ်ဦးစီးဌာန သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပ မိတ္ထီလာမြို့ အထက(၁) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ (၁၄)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... နွားထိုးကြီးမြို့ နယ်အသင်းတသင်းလုံးကျွတ်စည်းဝေးပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲကျင်းပမည်... Super Seven Stars(SSS) အဆင့်မြင့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ တက်ရောက်အားပေးချီးမြှင့်... ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် အလုံဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် လှိုင်သာယာ-အလုံ ၂၃ဝ KV မဟာဓာတ်အားလိုင်း လှိုင်မြစ်ကျော် တာဝါတိုင် တည်ဆောက်ရေးစစ်ဆေး... မော်လမြိုင်မြို့ ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းနေလင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကွမ်ကျိုးမြို့ ၌ ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် (၁၆)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော မြန်မာဘိလိယက် အားကစားသမား နေသွေးဦးနှင့် ကျော်ဦးတို့ အကြိုဗိုလ်လုပွဲတက်ရောက်... မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိ... တမူးတွင် ငါးမျိုးစိုက်ထည့်... ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန ကွန်ပျူတာ(အခြေခံ) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂ဝ၁ဝ)နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄/၂ဝ၁ဝ)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ... ဆူဒန်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတထံသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ယုက၎င်း၏ ခန့်အပ်လွာကို ပေးအပ်... ဗဟန်းအမျိုးသမီးဆေးရုံ မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီးစီးခြင်း ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် (၁၉၆၉-၁၉၇၄) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမည်... ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးတွင် တာဝန်ရှိသူအားလုံး တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင် လူတိုင်း အစားအသောက်ဆင်ခြင်ကြပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင် နေထိုင်... ဒီရေတောများထိန်းသိမ်းရေး ရေဖြူ၌ ဟောပြော ရန်ကုန်-မကွေး-မန္တလေးပြည်ထောင်စုလမ်းပေါ်မှ ဒေါင်းနေချောင်းအဟန့်အတား ကျော်လွားသွားနိုင်တော့မည် _ သတင်းဆောင်းပါး - ဇော်မိုးသောက် - ဓာတ်ပုံ - ခင်မောင်ဝင်း(ကြေးမုံ)... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်း ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ခေါပြင်ချောင်းတံတား ပြုပြင်ဆောက်လုပ်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲအောင် ပုသိမ်ကြီးမြိုန့ ယ်၌ မိုးစပါးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မိုးစပါးအထွက်မှန်ကန်ရေး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၌ စံကွက်ရိတ်သိမ်း... ပြည်သူ့ထံမှ ပေးစာများ... (၉၉)ကြိမ်မြောက် သွေးလှူ... တောင်ပိုင်းဒေသများ ကွက်ကျားမိုး အနည်းငယ်ရွာနိုင်... ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်အချပ်ပို (၃၂)မျက်နှာပါရှိ
Format/size: pdf (1.51 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အစဉ်သတိပြုကာကွယ်... ရန်ကုန်-ပြည်-မကွေးလမ်းနှင့် အမှတ်(၄)လမ်းမကြီး ပြုပြင်ဖောက်လုပ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေးနှင့် လွဲပြောင်းပေးရေး B.O.T ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆို... နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ သင်ကြားပေးလျက်ရှိ... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်းအားကစားအသင်းများနှင့် တွေ့ဆုံ... ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋနှင့်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့... KMD က တန်ဆောင်တိုင် အထူးစျေးရောင်းပွဲ Road Show ပြုလုပ်မည်... မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်... မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်... ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဆွေ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွက် လူနာတင်ယာဉ် ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ တက်ရောက်... အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်...ASEAN preneurs Youth Leaders Exchange (AYLE 2010)လူငယ်များ စတင်လျှောက်ထားနိုင်... ကလော/အေးသာယာ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းသားဟောင်းများ အလှူငွေပေးအပ်... အထကနှင့် အထက(ခွဲ)ပြွန်တန်ဆာမြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ဟင်္သာတ GTI တတိယအကြိမ်အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်... Tip Top အမှတ်တံဆိပ် အင်ဂျင်ဝိုင်နှင့် စက်ဆီ ချောဆီများ အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲကျင်းပ ပုသိမ်ပညာရေးကောလိပ်... ငွေရတုအထိမ်းအမှတ်စေတီရွေထီးတင်ပွဲနှင့် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ကျန်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်... တောင်ငူ(ဂျီတီအိုင်) အာစရိယပူဇော်မည်... ခြေလျင်နှင့်တောင်တက်အဖွဲ့ဝင်များအား အောင်နိုင်ရေးအလံပေးအပ်ပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇေယျာအောင် တက်ရောက်... လှည်းကူးမြို့ နယ်၌ မိုးစပါးအထွက်မှန်ကန်ရေးအတွက် စံကွက်ရိတ်သိမ်း ကျိုက်လတ်မြို့ နယ်အသင်း(ရန်ကုန်)... အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဘ)ဦးအောင်ဆန်းအားပြစ်ဒဏ်အားလုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြုလိုက်ခြင်း... အအေးမိတုပ်ကွေးဖျားနာပျောက်ဆေး အချို့တွင် ပါဝင်သော ဖီနိုင်းပရိုပါနော်လမင်း (PPA) ၏ ဆိုးကျိုးများဟောပြော... Wise မှ ABE Diploma သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်... မြန်မာအမျိုးသမီး စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းဝင် ကိုရီးယားတွင် သင်တန်းတက်ရောက်... ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ် အတွဲ( ၆ ) အမှတ်(၄၄) ထွက်ရှိ... နေပြည်တော်ပထမဆုံးအကြိမ် နေပြည်တော်-မန္တလေး-နေပြည်တော် မိုင် ၃၉ဝ ခရီးရှည် အမျိုးသား-အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေ ကနောင်အသင်း(ရန်ကုန်) သတ္တမအကြိမ်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့်ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲကျင်းပမည်... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ နေပြည်တော်၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမည်... ပြည်ပရတနာကုန်သည်များ သွားလာ၊ နေထိုင်၊ စားသောက်မှု အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား (သတင်းဆောင်းပါး-တင်ထွေး၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း-ကိုထွေး)... ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် အချပ်ပို( ဂ)မျက်နှာပါရှိ
Format/size: pdf (1.09 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်အေး ဥတ္တရသီရိဆေးရုံသစ်ဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... တည်ငြိမ်အေးချမ်း ဒီမိုကရေစီရှေ့ခရီးလမ်း... ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) တံခွန်စိုက်ဒိုင်း ပြေး၊ ခုန်၊ ပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကာယဗလမောင်ပြန်လည်စိစစ်မည်... ပုံနှိပ်နှင့် ထုတ်ဝေသူအသင်းဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ... ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ပညာသင်နှစ် သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်... ဆင်ဖြူကျွန်းအသင်း(ရန်ကုန်) သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့်... ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည်... ဗလငါးတန်ဖွံ့ ဖြိုးဖို့ စာအုပ်စာပေ လေ့ လာစို့... အိမ်မဲမြို့နယ်စည်ပင်လမ်းအဆင့်ပြုပြင်... ဖျာပုံမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်) ထူးချွန်ကျောင်းသားများ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပမည်... ဖြစ်သည်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ ကျန်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်... မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေနှင့်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း... Hospitality Management Course သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည် News Watch (စောင့်ကြည့်)သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၆)၊ အမှတ်(၁ )ထွက်ရှိ... အမက(၄) အင်းစိန် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပ... စစ်တွေမြို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နှစ်လယ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြပွဲကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းစည်းဝေး... အာကာတစ်ခွင် အလှဆင်မည့်တောင်ပေါ် မြို့မှ မီးပုံးပျံပွဲတော်... မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်... ကိုရီးယားတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ရန် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ၌ လျှောက်လွာတင် စာရင်းရေးသွင်းထားသူများ Passport သက်တမ်းရှိနေရန်လိုအပ်... ဗီယက်နမ်လေကြောင်းလိုင်း၏ ဟိုချီမင်း-ရန်ကုန်-ဟိုချီမင်း တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်း စတင်ပြေးဆွဲမည့်ခရီးစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်း... ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်အချပ်ပို( ၄)မျက်နှာပါရှိ... ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုကြရမည့် အမျိုးသားရေးအောင်ပွဲ(ဆောင်းပါး-မြတ်ဘုန်းလူ)
Format/size: pdf (946.07 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ဆဌအကြိမ် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ၄၇ ပါးစုံညီ ဒွါဒသမအစည်းအဝေး ကျင်းပမည်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် (၅)ကြိမ်မြောက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် (၄)ကြိမ်မြောက် အက်မက်စ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်မည်... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စည်ပင် မြန်မာ့ကျေးလက်တစ်ခွင်(အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း ရွေပြည်သာမြို့နယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... PARKROYAL Yangon လူငယ်ပန်းချီပြိုင်ပွဲ ၂ဝ၁ဝ ကျင်းပမည်... ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီးသို့ ငွေလှူဒါန်း... အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ရခိုင်ပြည်နယ် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသမျာ၌ကျန်းမာရေးကွင်းဆင်းအဖွဲ့များနှင့် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ ကျန်း မာရေးစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိ... General Air Conditioners ၏မန္တလေးရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ပွဲနှင့်Technical Seminar ကျင်းပ... သုံးထပ်ဗိမာန်တော်ကြီးတည်ဆောက်ရန် ငွေလှူဒါန်း... အထူးအယူခံခုံရုံး နေပြည်တော်၌ ရုံးထိုင်ကြားနာ... မီးကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်... ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကွန်ကရစ်လမ်းချောများ ခင်းကျင်းမှု၊ စက်ရေတွင်းတူးဖော်မှုနှင့် အုတ်ရေလှောင်ကန်တူးဖော်မှုများ မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ကိုရီးယား စကားပြောပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်မသုံးစွဲရနေ... ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မြဝတီပြက္ခဒိန်ထွက်ပြီ... လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် လက်တွဲချီတက်ကြပါစို့ (ဆောင်းပါး- ဥပဒေလေ့လာသူတစ်ဦး)... အထက်သံလွင်( မိုင်းတုံ)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် မဝင်းမမ(ခ)အငယ်လေးတို့၏ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အထူးအယူခံမှုများ အမိန့်ချမှတ်ခြင်း... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်... အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားများက ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံး၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့... မြန်မာနိုင်ငံ ဒီလာဆာ ပညာရေးကျောင်း နှစ်(၁၅ဝ)ပြည့် ကျင်းပမည်... ထူးခြားသည့် ညအပူချိန်များ... ယနေ့ထုတ်ကြေးမုံသတင်းစာတွင် အချပ်ပို( ၈)မျက်နှာပါရှိ
Format/size: pdf (706.69 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်... ပင်လယ်ပိုင်းဒေသ လမ်းကွန်ရက်များပေါ်ထွက် လူနေမှုဘဝတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်... ကာယဗလမောင်နှင့် ကာယအလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲအောင် တက်ရောက်... ခရမ်းမြို့နယ် ဂီတအစည်းအရုံး စည်းရုံးရေးကော်မတီ (၆၃)ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့သီချင်းအဆိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် အကြိုညှိနှိုင်း... မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း လက်တွေ့သရုပ်ပြမည်... တရုတ် စူပါလိဂ်ထိပ်တန်းကလပ် ဒါလီယံအသင်း ကျန်ရှိသည့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် ခြေစမ်းပွဲ နှစ်ပွဲ ကစားမည်... လက်မှတ်ရ အဆင့်မြင့်မြေတိုင်းသင်တန်းနှင့် GPS & Google Earthလက်တွေ့အသုံးချနည်းသင်တန်းဖွင့်မည်... Myanmar WWW Institute သင်တန်းကျောင်းမှ အိုင်တီနည်းပညာသင်တန်းများ ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်...မြန်မာ - ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း တိုင်းမှူးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း ပြေး၊ ခုန်၊ ပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ တက်ရောက်... ကျိုက်ထိုမြို့နယ် အကြိုအခြေခံမီးသတ်သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ... အမြို့ မြို့အနယ်နယ်တွင် သာယာစည်ပင်... ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ် ၁၉၇၅-၇၉ ခုနှစ် ဓာတုဗေဒ၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ ဆရာကန်တော့ ပွဲ ကျင်းပမည်... ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့၌ ပူးတွဲလေ့ ကျင့်ရန် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် တင်းနစ်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ... စက်ရေတွင်းတူးဖော်... (၁၆)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အားကစားအဖွဲ့များ ကွမ်ကျိုးမြို့သို့ ထွက်ခွာ... အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုအား ရတနာပုံအသင်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း... မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲကို အာဆီယံအသင်းကြီးက ကြိုဆို မူဝါဒလမ်းစဉ် (၇) ရပ်တွင် အဓိကအရေးပါသော ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ် ပြောကြား... အာဆီယံအသင်းကြီးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ထောက်ခံသွားရန်အသင့်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံဥက္ကဋက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... အမျိုးသားလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း... တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသများ မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်... ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိပေးကြေညာချက်... ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြောင်းမြခရိုင်တစ်ခွင် ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်...ပင်လယ်ပိုင်းဒေသ လမ်းကွန်ရက်များပေါ်ထွက် လူနေမှုဘဝတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ... ကာယဗလမောင်နှင့် ကာယအလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲအောင် တက်ရောက်
Format/size: pdf (1.25 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ရခိုင်ပြည်နယ် လေဘေးဒဏ်ကြုံတွေ့ရသည့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အလှူငွေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်း... ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသအတွက် ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းမကြီးသည် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဖြစ် ခရီးသွားရင်း လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ရှေးဟောင်းမြို့များကို ဝင်ရောက်လေ့ လာနိုင်မည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကျော်ဇော သံလွင်တံတား(တာပါး) ကြံ့ခိုင်မှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်မှလှူဒါန်းသည့် အဆောက်အအုံဖွင့်ပွဲ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပ... စံပြလေ့ကျင့်ရေးအလယ်တန်းကျောင်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... လေဘေးဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် ငွေနှင့်ပစ္စည်းများ လက်ခံလျက်ရှိ... အလိုအလျောက် မော်တော်ယာဉ် မှတ်တမ်းတင်စနစ် (Car Blackbox System) မိတ်ဆက်... ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၏ သတိပေးလက္ခဏာများ... ဘုရင်နောင်​စျေးကြီး ပညာရည် ချွန်ဆု များချီး မြင့်မည်... တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို တရုတ်ကြိုဆို... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလွင် တိုင်းမှူးတံခွန်စိုက်ဒိုင်း (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲနှင့်ဆုချီးမြှင့် ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်... အလွန်အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး‘‘ဂီရိ’’တိုက်ခတ်ခဲ့သော်လည်း (ဆောင်းပါး-တင်ငွေ ( မိုး/ဇလ))... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆန်းဦး တောင်ကြီးမြို့ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်... Telephone Voice Logging System တယ်လီဖုန်း မှတ်တမ်းတင်စနစ်မိတ်ဆက်... ရွေဘိုမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်) နှစ်ပတ်လည်စည်းဝေးမည်... ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်တို့ရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသများ၌ ကွင်းဆင်းဆေးကုသ... ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်... (၃၄)ကြိမ်မြောက် သွေးလှူရှင်ဂုဏ်ပြုပွဲ ကျင်းပမည်... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဆဋမအကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်... မြိုင်မြို့နယ် မိုးရာသီ အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ... မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဉဏ်ရည်မမီသူများ အားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်... နိုင်ငံတစ်ဝန်း အောက်တိုဘာလအတွင်း မီးလောင်မှု အကြိမ် (၅ဝ) ဖြစ်ပွား... ကေအင်န်ယူအကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖျက်သမားများက မြဝတီမြို့အတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအချို့ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းနှင့် ဘုရားသုံးဆူမြို့ကို ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်း... မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၌ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်... အထက(၁)မြင်းခြံ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ ပထမအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်... စီးပွားရေးပညာရှင်ကြီးများ အစုံအလင်ပါဝင်မည့် ဆွေးနွေးပွဲသင်တန်း ကျင်းပမည်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်ဌေး ကော့ သောင်းမြို့နယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ထားဝယ်မြို့နယ်တွင် မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်း မြန်မာနိုင်ငံ အလေးမအဖွဲ့ချုပ် တတိယအကြိမ် သက်ကြီးဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ ကျင်းပ... အမှတ်(၁) တပ်မတော်သားဖွားမီးယပ်နှင့်ကလေးဆေးရုံသို့ သဘာဝရဲယိုဓာတ်စာများ လှူဒါန်း... ရွေဘိုတွင် နွေစပါးစိုက်ပျိုးမှု တိုးတက်မြင့်မား
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘုရင်ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွာပေးပို့... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ထံ သဝဏ်လွာပေးပို့... ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲပေးမှု နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... အခြေခံကောင်းများ လူ့ စွမ်းအားဖြင့် ပေါင်းစပ်တီထွင် ဘဝရှေ့ရေးမြင့်မားရေး ကြိုးပမ်းထာဝစဉ်(အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများသို့ လှည့်လည်ဆေးကုသမှု ဆောင်ရွက်... ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း သဝဏ်လွာပေးပို့... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များ မကွေးမြို့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှုများကို ကြည့်ရှုလေ့လာ... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သံတမန်များ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့၌ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ လွတ်လပ်ပျော်ရွင်စွာ ဆန္ဒမဲပေးနေမှု ကြည့်ရှုလေ့ လာ... ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နှင့် ဖလမ်းမြို့တို့၌ ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို သံတမန်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... ရန်ကုန်မြို့ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်း တက်ရောက်... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်ညွန်ကြားရေးမှူး မအူပင်- တွံတေး-လှိုင်သာယာ လမ်း ဖောက်လုပ်ရေးကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သံတမန်များ ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့၌ ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကြည့်ရှုလေ့လာ... မုံရွာမြို့၌ ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှကွင်းဆင်း ဆေးကုသ​ရေးအဖွဲ့များမုန်တိုင်းသင့်ဒေသများသို့လှည့်လည်ဆေးကုသမှုဆောင်ရွက်
Format/size: pdf (1.33 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ သတ်မှတ်မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီး၌ ကျင်းပ... နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေနှင့် ဇနီး ဒေါ် ကြိုင်ကြိုင် မဲရုံသို့လာရောက်ဆန္ဒမဲပေး... နေပြည်တော်-ပင်လောင်းလမ်း လိန်းလီတံတားသစ်ဖွင့်လှစ် တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဆက်သွယ်သွားလာမှု မြန်ဆန်သွက်လက်... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံ ဒေါက်တာတင်အောင်အေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်(၄)ခရိုင်အတွင်း ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲပေးမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံ ဒေါက်တာတင်အောင်အေး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်(၄)ခရိုင်အတွင်း ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲပေးမှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး လာအို သံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ နေပြည်တော်ခရိုင်အတွင်း ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှု ကြည့်ရှုလေ့လာ... အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ပြည်သူ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကြေညာ... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့၌ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှု ကြည့်ရှုလေ့ လာ... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ ရှမ်း ပြည်နယ်( မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့၌ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲပေးမှုနှင့်မဲရေတွက်မှုတို့ကိုကြည့်ရှုလေ့လာ... သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ မန္တလေးမြို့၌ ဆန္ဒမဲပေးမှုများ ကြည့်ရှုလေ့လာ... ပြည်မြို့၌ မဲဆန္ဒရှင်များ ဆန္ဒမဲပေးမှုကို ဘင်္ဂလားဒေ့ ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သည့် သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... သံတမန်များနှင့် သတင်းထောက်များ စစ်တွေမြို့နယ်၌ ကျင်းပသည့် ဆန္ဒမဲပေးမှုများကို ကြည့်ရှုလေ့ လာ... ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၌ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ လွတ်တော်အသီးသီးအတွက် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံတမန်များ တောင်ကြီးမြို့၌ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှု ကြည့်ရှုလေ့ လာ... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သံတမန်အဖွဲ့ နာယက စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့် သံတမန်များ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့နယ်တွင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှုများကို ကြည့်ရှုလေ့ လာ... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မဲရုံများ၌ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ စနစ်တကျ ဆန္ဒမဲပေးနေမှုနှင့် မဲရေတွက်မှုတို့ကို သံတမန်များ၊ သတင်းထောက်များ ကြည့်ရှုလေ့လာ... ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း ကြေညာ
Format/size: pdf (1.39 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၌ စမ်းသပ်တိုင်းတာမှုများအရ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရ... ပုလဲမြို့နယ်၌လည်း ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ခိုအောင်းမှုအလားအလာ လွန်စွာကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိ... တွေ့ရှိထားသော ဓာတ်ငွေ့သိုက်၏ Reserve ကို ခိုင်မာစွာသိရှိအောင်ဆောင်ရွက် ဤလုပ်ကွက်မှ ထုတ်ယူရရှိမည့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုမည်... မဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်စီ ယနေ့ မဲပေးမည် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) တောင်သာမြို့နယ် ဖက်တောကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ... တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဆန်းဦး တောင်ကြီးမြို့ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်... ညောင်ဦးခရိုင်၌ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ လေ့ လာရေးသွားရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသားဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်၏ပြယုဂ်တစ်ခုအဖြစ် လိန်းလီတံတားအသစ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ နေပြည်တော်ပင်လောင်းလမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ယဉ်တစ်စီးချင်း ၇၅ တန်ခံနိုင်ဝန်ရှိ ပေ ၁၈၀ အထက်၂၄၉ စင်းမြောက် စီမံကိန်းဝင်တံတားကြီးဖြစ်... စိတ်ရင်းစေတနာမှန်သူ လူကောင်းလူတော်ရွေးချယ် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်)... အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ရေး နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဘောလုံးအားကစားကွင်းနှစ်ကွင်း တည်ဆောက် (သုဝဏ္ဏ) ဘောလုံးကွင်းကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကွင်းအဖြစ် ပွဲကြည့်စင်များကို တိုးချဲ့... ‘‘မြန်မာတို့၏ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ’’ (ဆောင်းပါး-ဖိုးရေချမ်း) ...‘‘ပြည်ထောင်စု၏ ရှေ့ခရီး’’(ကဗျာ-ဦ လူငြိမ်းသစ်) ... ‘‘တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်လုပ်မယ့်သူကိုပဲ ပေးမှာပါ’’(ကာတွန်း-လွမ်းမောင် သုဝဏ္ဏ)... သောင်းကျန်းသူများထောင်ထားသည့်မိုင်းတစ်လုံး နင်းမိပေါက်ကွဲသဖြင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ... ယခင်က နေပြည်တော်မှ ပင်လောင်းသို့ မော်တော်ကားဖြင့်သွားမည်ဆိုလျှင် မိတီလ္ထီလာ-အောင်ပန်းမှတစ်ဆင့် ကွေ့ဝိုက်သွားခဲ့ရသော်လည်း ယခု တိုက်ရိုက်သွားလာနိုင်...
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီဥကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... ‘‘ကျွန်ုပ်တို့ မဲပေးကြမည် (နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအား ကျင့်သုံးခြင်း)’’ဆောင်းပါး-မြင့်မောင်(Phil -Q)... ‘‘လှိုက်လှဲ ဝမ်းသာ မဲပေးပါ ’’(ကဗျာ-ပန်းတောင်းသန်းကြွယ်)... သမိုင်းတစ်ခေတ်မော်ကွန်းသစ် ဆန္ဒမဲပေးဖွင့်လှစ် ... မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ က ဦးဆောင်တင်သွင်းသည့် နျူကလီးယား လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး အဆိုမူကြမ်းကို (၆၅)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ပထမကော်မတီတွင် အောင်မြင်စွာ အတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့... ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၌ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ... စက်မှုဇုန် စက်ရုံလုပ်သားများအား လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမှု ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် ကြည့်ရှုအားပေး ပညာတတ်လူ့စွမ်းအား အရင်းမြစ်များကိုမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိသော ပညာရေးကဏ္ဍြမှင့်တင်ဆောင်ရွက်မှုများ(ဆောင်းပါး-ဌေးအောင်)...
Format/size: pdf (1.31 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ အီဂျစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေထံ ဘရာဇီးလ်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွာပေးအပ်... ပြည်သူတို့၏မဲတစ်ပြားသည်- ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်မည့် ရွေအုတ်တစ်ချပ်ဖြစ်၏ (ဆောင်းပါး-ခိုင်မျိုးညီလာအောင်)... မဲရုံသို့အရောက်သွား ဆန္ဒမဲများပေးကြပါစို... ဂီရိဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်သင့်မြို့နယ်များ၌ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်... ဒီမိုကရေစီလမ်း လျှောက်လှမ်းကိုယ်စီ မဲရုံဆီ...
Format/size: pdf (1.14 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ စက်မှုဇုန်နယ်မြေနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မော်တော်ကားလမ်းနှင့် ရထားလမ်းများ ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း မူဘောင်သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အတွင်းရေးမှူး(၁) သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦး တက်ရောက်ချီးမြှင့်... ‘မှတစ်ပါး အခြားမရှိ’ (ဆောင်းပါး-ရန်ကြီးအောင်)... သမိုင်းပေးတာဝန် ကျေပွန်စေရေး ဆန္ဒမဲပေး... ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အကျုံးဝင်အာမခံ အလုပ်သမားများ၏ ဆေးဖိုးကုန်ကျငွေများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်... ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ နီလာဟတ်ဆိုင်ရာလတ်အား ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီ... ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ ကျင့်ရေးအဖွဲ့ ဥကဌ ဦးကျော်သူ... အာဆီယံ နည်း ပညာအစည်း အဝေးနှင့်ဆက်စပ်အစည်း အဝေး တက်ရောက်ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိ...လမ်းများအဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မှု ရန်ကုန်မြို့၀န်စစ်ဆေး
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် (၈ )ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၅)ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ် အာဆီယံ-ရုရှား ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ သြစတြေးလျ ထိပ်သီးအစည်း အဝေးနှင့်အာဆီယံ နယူးဇီလန် ထိပ်သီး အစည်း အဝေးများသို့တက်ရောက်... နိုင်ငံတော်သစ် ထုဆစ်ပုံဖော်ရာတွင် လူတိုင်းပါဝင်... နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဉ ဏ်ဝင်း (၁၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားများတွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ ငုယင်မင်ကျစ်ရက်အား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်... ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာဠုရဲ့ ဒါ့ထက်တောင်ပိုသေး(ဆောင်းပါး- မောင်ကာဠု)... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့ ၌ ကျင်းပသည့် (၁၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 November 2010/ "ကြေးမုံ" နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မဲရုံကိုသွားလို့ မဲပေးကြပါစို့(ဆောင်းပါး-မျိုးမြတ်မောင်)... ပန်းတိုင်ရှေးရှု တူညီဆန္ဒမဲပေးကြ... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံအကြီးအကဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများနှင့် အာဆီယံ စီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီ ခေါင်းဆောင်များ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံအကြီးအကဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ သီးသန့်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဒုတိယအကြိမ် မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်... မဲခေါင်-ဂျပန် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုခိုင်မာရေးနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ နိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်လက်တိုးမြှင့်ရေး အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေး... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တတိယအကြိမ် အာဆီယံ - ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်... နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးဉဏ်ဝင်း အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမျိုးသားနေ့ သဝဏ်လွာပေးပို့
Title: "The Mirror" ("Kyemon") " 31 October 2010/ " ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၃၁၊၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မြန်မာ့လူ့ဘောင်၏လူနေမှုဟန်အပြောင်းအလဲတွင် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာသော သတင်းအချက်အလက် နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ... အရွေးမတူသော်လည်းအတွေးတူညီမဲပေးမည်(ဆောင်းပါး)...ဒီမိုကရေစီဖြစ်တည်ရေး စုံညီဆန္ဒမဲပေး(ဆောင်းပါး)... ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မြို့နယ်အချို့မှ လေဘေးသင့်ပြည်သူများ နောက်ဆက်တွဲ ကူးစက်ရောဂါများ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာအနှံ့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
Format/size: pdf (1.18 MB)
Date of entry/update: 31 October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") " 30 October 2010/ " ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၃၀၊၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ခေတ်သစ်တစ်ခု ရှေးရှုဦးတည် မဲပေးမည် (ဆောင်းပါး)... ဂီရိမုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း... မြန်မာနိုင်ငံ ဘူမိသိပ္ပံအသင်း ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ရန် ထွက်ခွာ... မြန်မာ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာပြပွဲ - ၂ဝ၁ဝ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ တက်ရောက်... နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌဆရာတော် ဦးဆောင်သည့် ဆရာတော်ကြီးများ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ကြွရောက်... ဝန်ကြီးသိန်းညွန့်အား ကုလသမဂ္ဂစား နပ်ရိက္ခာရိက္ခာအစီအစဉ်ဌာနေကိုယ်စားလှယ် လာရောက်တွေ့ဆုံ... အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အိန္ဒိယတပ်မတော် လေ့ လာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့၌ ကြည့်ရှုလေ့ လာကြပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာ
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွာပေးပို့... ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် ဆန္မမဲပေးပွဲဖွင့်လှစ်... ရှမ်းပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေး... ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်းနှင့် ဝန်ကြီးများ စစ်တွေခရိုင် ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်းရှိ လေဘေးသင့်အိမ်ထောင်စုများအား ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများပေးအပ်ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေး... ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလပတ်အတွက် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်... နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်မသုံးစွဲရနေ့... ဝန်ကြီး ဦးဉဏ်ဝင်း တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့ သဝဏ်လွာပေးပို့
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ်ခိုင်မာရေး ကိုယ်စီမဲပေး(ရွေးကောက်ပွဲ ဆောင်းပါး)... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်... သူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးမှာ (ရွေးကောက်ပွဲ ဆောင်းပါး)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပျက်ပြားစေရန်၊ ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန် နှောင့်နှေးရပ်တန့်သွားစေရန် မလျော်ကန်သည့် အကြံဆိုးများဖြင့် အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး ကြံစည်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ နေပြည်တော်ခရိုင်၌ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ မှာကြား... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်းနှင့် ဝန်ကြီးများ စစ်တွေခရိုင်နှင့် ကျောက်ဖြူခရိုင်တို့အတွင်း မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာများရှိ လူနေအိမ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ ပျက်စီးမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... မဲပေးရာတွင် ‘ပယ်မဲ’ မဖြစ်စေရေး သတိပြုရန် အချက်များ... မဲပေးရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သော အချက်များ... အသိတရားဖြင့်ရှုမြင်၍ ကိုယ်တိုင်မဲပေးရွေးချယ်... မှန်ကန်သည့်ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်မှုဖြင့်အနာဂါတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ကြပါစေ-ဆောင်းပါး-ကျော်မင်းလူ (ရွှေပြည်သာ)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. အမျိုးသားရေးပန်းတိုင်အရောက် လက်တွဲလှမ်းလျှောက် (ရွေးကောက်ပွဲဆောင်းပါး)... မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်များ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ... University of Portsmouth သို့တိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးမည်... အင်အားအနည်းငယ်ရှိ မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှား... ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂီရိဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း...
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူမှုရေးတရားမျှတမှု၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ၏ ဘဝအဆင့်အတန်း မြင်မားမှုတို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ အရေးပါသည့်အခန်းကဏကို ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိ... နိုင်ငံရေးပါတီများ အစိုးရ၏မီဒီယာများ အသုံးပြုခွင့်အပါအဝင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုလုပ်ငန်းများ စတင်နေ ယှဉ်ပြိုင်မှုပမာဏအရ အားလုံးပါဝင်မှု (Inclusiveness)ရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်ငံသားတို့၏ အခွင့်အရေး ဆန္ဒမဲပေးကြစို့ (ဆောင်းပါး)... မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ... လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး သန္နိဋာန်ဖြင့် ကြိုးပမ်းသွားမည်... (၆၅)နှစ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်တက် ရောက်အမှာစကားပြောကြား...
Format/size: pdf (980.66 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ဆန္ဒမဲပေး ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လှမ်းစို့တူညီ မဲရုံဆီသို့ (ဆောင်းပါး)... ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း ရုံးလုပ်ငန်းသင်တန်းများဆင်းပွဲ ကျင်းပ... ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ စက်မှုပညာရှင် လာရောက်တွေ့ဆုံ... ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်မည်... Online ကုန်စည်ပြပွဲ ခင်းကျင်းပြသရန် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်း... မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းအား ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဘဏာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ ဆုံ... တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ ဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်း တက်ရောက်... မြေပြိုကျမှုအန္တရာယ်များမှ ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရန် သတိပေးနှိုးဆော်ချက်... မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး သတိပေးနှိုးဆော်ချက်... ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဂီရိနှင့ ်ပတ်သက်၍ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတိပေးချက်များ အချိန်နှင့ ်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၊ ရေဒီယိုနှင့်FM များက ဆက်တိုက်ထုတ်လွင့်ပေး၊ အမျိုးသားသဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့ ်ရှောက်ရေး ဗဟိုကော်မတီက လိုအပ်သော နှိုးဆော်ချက်များ အချိန်မီထုတ်ပြန်ပေး... News Watch (စောင့်ကြည့်) သတင်းဂျာနယ်ထွက်ရှိ... အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄/၂ဝ၁ဝ) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
Format/size: pdf (916.59 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာ... ဝန်ကြီး ဦးဌေးဦးအား ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အီတလီသမ္မတနိုင်ငံတို့မှ ဧည့်သည်အဖွဲ့များ လာရောက်တွေ့ဆုံ... ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဂီရိ(GIRI) ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်... ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ မုန်တိုင်းငယ် စစ်တွေနှင့် ကျောက်ဖြူအနီးမှ ဝင်ရောက်နိုင်...
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. သဲကုန်းမြို့၌ မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း ပို့ချ... အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အာရှဖိတ်ခေါ်ကာယဗလတံခွန်စိုက်ပြိုင်ပွဲ မြန်မာ ရွေတံဆိပ်နှစ်ဆု၊ ငွေတံဆိပ်နှစ်ဆု ရရှိ... ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်း ပြည်-ပေါက်ခေါင်း-တောင်ငူလမ်း တိုးတက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ထူးကဲဒီရေ ဝင်ရောက်ခြင်းခံရသည့် အိမ်ထောင်စုများအား တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်မောင်ဝင်း ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်... မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်လုပ်ငန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ထွန်းအောင်အား ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဧည့်သည်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ... မြန်မာနိုင်ငံသားသွေးလှူရှင် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ဆုနှင့် ထိုက်တန်
Format/size: pdf (1.20 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မြန်မာ့မီးရထားက အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြစ်ကြီး နား - ဗန်းမော် - မိုးမိတ် - ကျောက်မဲသီပေါ- လဲချား-နမ့်စန် ရထားလမ်းသည် ခရီးမိုင် ၄၇၄ ဒသမ ၅ဝ မိုင် ရှည် လျား... ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စက်မှုနိုင်ငံထူထောင်... နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒီရေတောများကို အကဲဖြတ်လေ့ လာခြင်း အကြိုစီမံကိန်း ကနဦးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ... လူ​နေမှုပုံစံနှင့်အများပြည်သူ၏ရွေးချယ်မှုပြပွဲ ၂၀၁၀ ရန်ကုန်မြို့တပ်မတော်ခန်းမ၌ကျင်းပ... ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘာဝဘေး အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ... သီပေါမြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့်ကားလမ်း၊ရထားလမ်းများအပါအဝင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှစီမံဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးဖြစ်၍ မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများအား နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ အခြားတည်ဆဲဥပဒေများ နှင့်အညီ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများပြုနိုင်ရန် ကြေညာချက်၊ ညွန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်လျက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိ ... ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ လွတ်တော်အသီးသီးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းကြသူများအနက် စိစစ်ပြီးသည့် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ဝဝဝ ကျော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်အနေဖြင့် မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှ မျက်နှာလိုက်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးပေးခြင်းမရှိ ... ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ ခွဲများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း လမ်းများ အဆင့်မြင့်ရေးနှင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေး မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး... ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသော နိုင်ငံသားများသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိ ... ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့သော ပါတီ(၅)ခုရှိရာ တရားဝင်ရပ်တည်လျက်ရှိသော ပါတီ(၃၇) ပါတီရှိ၊ ယင်းနိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊‘‘ဝ’’ အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုပါတီများလည်း ပါဝင်... ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး မဲပေးပိုင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေနှင့်အညီ မဲစာရင်းများကို စနစ်တကျ ပြုစုထားပြီးဖြစ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်အတွက် သီးသန့်မဲပုံးနှင့် ဆန္ဒပြုခန်းများ စီစဉ်ပေးထား... မဲရုံမှူးက ပယ်သည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို ဆန္ဒမဲ ရေတွက်ရာတွင် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ယင်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အကူကိုယ်စားလှယ်များသည် ကြည့်ရှု ခွင့်ရှိ... လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူသည် မိမိ၏ အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွာကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိ။
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 October 2010/ "ကြေးမုံ" အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၀
Description/subject: PLEASE, USE Myanmar3 FONT TO SEE THE TEXT. မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး စွမ်းအားပြည့်ကြိုးပမ်း ... နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘားစီးတီး)ဖွင့်လှစ် ... ဝန်ကြီး ဦးဌေးဦးအား ဂျပန်နိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အထက်လွတ်တော်အမတ် လာရောက်တွေ့ဆုံ .. ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း နေပြည်တော်ခရိုင်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများ ကျောင်းနှင့်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေး ... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကာယဗလမောင်နှင့် ကာယအလှမယ် လူရွေးပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပမည် ... တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးသိန်း မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ... ယခုအပတ်ထုတ် မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်ဖြန့်ချီ ... နိုင်ငံတကာမျက်မမြင်လမ်းလျှောက်တုတ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖလား (၁၉)ကြိမ်မြောက် မျက်မမြင်လမ်းလျှောက်ပွဲ ကျင်းပ ... မြင်းခြံမြို့ နယ်၌ မိုးကြိုးထိမှန်သဖြင့် မိသားစုသုံးဦး သေဆုံး ...
Format/size: pdf (1.47 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 October 2010
Format/size: pdf (1.15 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 October 2010
Format/size: pdf (1.24 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 October 2010
Format/size: pdf (678 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9October 2010
Format/size: pdf (486.87 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 October 2010
Format/size: pdf (504.82 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7October 2010
Format/size: pdf (506.93 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6October 2010
Format/size: pdf (683.87 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4October 2010
Format/size: pdf (533 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2October 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 October 2010
Format/size: pdf (581 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 September 2010
Format/size: pdf (622 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 September 2010
Format/size: pdf (683 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 September 2010
Format/size: pdf (640.58 K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 September 2010
Format/size: pdf (648.65 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 September 2010
Format/size: pdf (738 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 September 2010
Format/size: pdf (770 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 September 2010
Format/size: pdf (604 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 September 2010
Format/size: pdf (624 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 September 2010
Format/size: pdf (552 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 September 2010
Format/size: pdf (701 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 September 2010
Format/size: pdf (641 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 September 2010
Format/size: pdf (663 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 September 2010
Format/size: pdf (760 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 September 2010
Format/size: pdf (686 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 September 2010
Format/size: pdf (560 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 September 2010
Format/size: pdf (703 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7September 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6September 2010
Format/size: pdf (646 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5September 2010
Format/size: pdf (623 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4September 2010
Format/size: pdf (597 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3September 2010
Format/size: pdf (547 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2September 2010
Format/size: pdf (539 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 September 2010
Format/size: pdf (709 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 31 August 2010
Format/size: pdf (603 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 August 2010
Format/size: pdf (590 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 August 2010
Date of entry/update: 26 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 August 2010
Date of entry/update: 24 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 August 2010
Format/size: pdf (639K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 August 2010
Format/size: pdf (780K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7August 2010
Format/size: pdf (720K)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 August 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 31 July 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 July 2010
Format/size: pdf (2.82 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 July 2010
Format/size: pdf (8 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 July 2010
Format/size: pdf (766.70 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 July 2010
Format/size: pdf (731.20 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 July 2010
Format/size: pdf (594.63 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 July 2010
Format/size: pdf (655.13 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 July 2010
Format/size: pdf (631.95 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 July 2010
Format/size: pdf (669.65 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 July 2010
Format/size: pdf (776.79 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 July 2010
Format/size: pdf (696.15 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 July 2010
Format/size: pdf (655.38 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 July 2010
Format/size: pdf (615.34 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 July 2010
Format/size: pdf (727 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 July 2010
Format/size: pdf (790.86 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 July 2010
Format/size: pdf (594.11 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 July 2010
Format/size: pdf (591.46 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 July 2010
Format/size: pdf (800.53 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 July 2010
Format/size: pdf (823.85 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 July 2010
Format/size: pdf (674.03 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 July 2010
Format/size: pdf (683.97 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 July 2010
Format/size: pdf (630.46 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9July 2010
Format/size: pdf (704.74 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 July 2010
Format/size: pdf (672.65 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7July 2010
Format/size: pdf (672.99 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6July 2010
Format/size: pdf (588.97 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5July 2010
Format/size: pdf (617.10 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4July 2010
Format/size: pdf (699.32 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3July 2010
Format/size: pdf (660.67 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2July 2010
Format/size: pdf (646.82 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 July 2010
Format/size: pdf (579.98 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 June 2010
Format/size: pdf (3.38 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 June 2010
Format/size: pdf (612 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 June 2010
Format/size: pdf (660 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 June 2010
Format/size: pdf (593 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 June 2010
Format/size: pdf (541 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 June 2010
Format/size: pdf (719 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 June 2010
Format/size: pdf (637 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 June 2010
Format/size: pdf (669 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 June 2010
Format/size: pdf (614 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 June 2010
Format/size: pdf (731 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 June 2010
Format/size: pdf (628 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 June 2010
Format/size: pdf (774 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 June 2010
Format/size: pdf (652 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 June 2010
Format/size: pdf (568 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 June 2010
Format/size: pdf (644 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 June 2010
Format/size: pdf (594 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 June 2010
Format/size: pdf (553 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6June 2010
Format/size: pdf (617 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5June 2010
Format/size: pdf (640 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4June 2010
Format/size: pdf (1.38 MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3June 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2June 2010
Format/size: pdf (666 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 June 2010
Format/size: pdf (661 KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 31 May 2010
Format/size: pdf (618KB)
Date of entry/update: 01 March 2011
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 May 2010
Format/size: pdf (647KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 May 2010
Format/size: pdf (690KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 May 2010
Format/size: pdf (701KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 May 2010
Format/size: pdf (698KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 May 2010
Format/size: pdf (649KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 May 2010
Format/size: pdf (713KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 May 2010
Format/size: pdf (711KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 May 2010
Format/size: pdf (702KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 May 2010
Format/size: pdf (709KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 May 2010
Format/size: pdf (747KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 May 2010
Format/size: pdf (719KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 May 2010
Format/size: pdf (869KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 May 2010
Format/size: pdf (625KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 May 2010
Format/size: pdf (575KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 May 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 May 2010
Format/size: pdf (666KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 May 2010
Format/size: pdf (567KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 May 2010
Format/size: pdf (620KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 May 2010
Format/size: pdf (603KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 May 2010
Format/size: pdf (665KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 May 2010
Format/size: pdf (627KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9May 2010
Format/size: pdf (694KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 May 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7May 2010
Format/size: pdf (679KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6May 2010
Format/size: pdf (757KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4May 2010
Format/size: pdf (691KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3May 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2May 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 May 2010
Format/size: pdf (725KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 April 2010
Format/size: pdf (732KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 April 2010
Format/size: pdf (692KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 April 2010
Format/size: pdf (758KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 April 2010
Format/size: pdf (683KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 April 2010
Format/size: pdf (688KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 April 2010
Format/size: pdf (750KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 April 2010
Format/size: pdf (829MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 April 2010
Format/size: pdf (818MB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 April 2010
Date of publication: 20 April 2010
Format/size: pdf (842KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 April 2010
Date of publication: 19 April 2010
Format/size: pdf (836KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 April 2010
Format/size: pdf (731KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 April 2010
Date of publication: 17 April 2010
Format/size: pdf (819KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6April 2010
Format/size: pdf (764KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5April 2010
Format/size: pdf (674KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3April 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2April 2010
Format/size: pdf (682KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 April 2010
Format/size: pdf (700KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 31 March 2010
Format/size: pdf (600KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 30 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 29 March 2010
Format/size: pdf (630KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 March 2010
Format/size: pdf (619KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 March 2010
Format/size: pdf (644KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 March 2010
Format/size: pdf (631KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 March 2010
Format/size: pdf (612KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 March 2010
Format/size: pdf (605KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 March 2010
Format/size: pdf (952KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 20 March 2010
Format/size: pdf (622KB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 March 2010
Format/size: pdf (559KMB)
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 1 March 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 28 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 27 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 26 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 25 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 24 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 23 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 22 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 21 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 19 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 18 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 17 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 16 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 15 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 14 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 13 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 12 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 11 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 10 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")9February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon") 8 February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")7February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")6February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")5February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")4February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")3February 2010
Title: "The Mirror" ("Kyemon")2February 2010